နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်စွဲစွဲလမ်းမှုအားနည်းခြင်း (၂၀၀၈) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn
Rajita Sinha အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ စာရေးသူလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်; PMC 2009 သြဂုတ်လ 26 အတွက်ရရှိနိုင်ပါ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ: အဖြစ်နောက်ဆုံးတည်းဖြတ် form မှာထုတ်ဝေသည်။ 2008 အောက်တိုဘာလ; 1141: 105-130 ။ Doi: 10.1196 / annals.1441.030 ။ ဆေးပညာ၏စိတ်ရောဂါကုသမှု, ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း, New Heaven, Connecticut, စာပေးစာယူဘို့အမေရိကန်နိုင်ငံလိပ်စာဌာန: Rajita Sinha, Ph.D ဘွဲ့ကို, ပါမောက္ခ, စိတ်ရောဂါကုသမှုဌာန, ညွှန်ကြားရေးမှူး, ယေးလ် Interdisciplinary Center ကစိတ်ဖိစီးမှု, ဆေးပညာ၏ယေးလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်း,2ဘုရားကျောင်းစိတ်ဖိစီးမှု တောင်ပိုင်း, Suite 209, New Heaven, CT 06515 ။ Voice ကို: + 203-974-9608; ဖက်စ်: + 203-974-7076 ။ အီးမေးလ်: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
စိတ်ဖိစီးမှုစွဲ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်စွဲ relapse အားနည်းချက်အတွက်လူသိများတဲ့အန္တရာယ်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ လူဦးရေ-based နှင့် epidemiological လေ့လာမှုတစ်ဦးကစီးရီးတိကျတဲ့ဖိအားများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီ-Level variable တွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ Preclinical သုတေသနမှာလည်းစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-အတွေ့အကြုံရှိသတ္တဝါများထဲတွင်မူးယစ်ဆေးရှာကြံ reinstates ကြောင်းပြသထားတယ်။ အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှု, ကလေးတို့ကိုမတရားသဖွငျ့နှင့်အချက်နှင့် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး (CRF / HPA) ထုတ်သည့် corticotropin မြားတှငျပွောငျးလဲအပေါ်စုဆောင်းဒုက္ခသည် extrahypothalamic CRF သည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ arousal နှင့်ဗဟို noradrenergic စနစ်များလည်းတင်ပြကြသည်၏ deleterious ဆိုးကျိုးများ ။ mesolimbic dopamine, အချိုမှုများနှင့် gamma-အမိုင်နို-butyric အက်ဆစ်များပါဝင်သည်သော corticostriatal-limbic စိတ်ခွန်အားနိုး, သင်ယူခြင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေစနစ်များပေါ်ဤအကြောင်းကိုပြောင်းလဲမှု၏ဆိုးကျိုးများ (ဂါဘမြို့သား) လမ်းကြောင်းစွဲ၏စိတ်ဖိစီးမှု-related အန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့နောက်ခံ pathophysiology အဖြစ်ဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။ ဤအစိတ်ဖိစီးမှုမြားတှငျပွောငျးလဲနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များအပေါ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ဆိုးကျိုးများလည်းစိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်း, ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်နှင့် compulsive မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့် relapse လွယ်ကူစွာထိခိုက်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးပေါ်ဤအကြောင်းအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်များ၏သက်ရောက်မှုမှသီးခြားအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စွဲအကြားအသင်းအဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှု furthering အတွက်သုတေသနကွာဟချက်ကဤအဖြေမရတဲ့မေးခွန်းတွေ addressing ကိုသိသိသာသာစွဲလမ်းမှအားနည်းချက်ဖြေရှင်းရန်သစ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုမဟာဗျူဟာကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ဟုမြော်လင့်သည်နှင့်အတူ, တင်ပြနေကြပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုရှည်လျားစွဲမှအားနည်းချက်တိုးမြှင့်ဖို့လူသိများခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်ဒီအသင်းအဖွဲ့များအတွက်အခြေခံယန္တရားကိုနားလည်အတွက်သိသိသာသာတိုးမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ အမူအကျင့်များနှင့် neurobiological ဆက်စပ်မှုဖော်ထုတ်လျက်ရှိသည်နှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအပြောင်းအလဲများကိုအချို့သက်သေအထောက်အထားများဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လူ့လေ့လာမှုများဆုလာဘ်များနှင့်စွဲလမ်းအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက်ဒေသများမှခေတ်မီသည်ဦးနှောက်-ပုံရိပ် tools များပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်တဏှာနှင့်၎င်းတို့၏အသင်းဓာတ်ခွဲခန်း-သွေးဆောင်နည်းလမ်းများ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်စာမေးပွဲမှအကြိုးပါပြီ။ ဤစာတမ်းသည်လူသားများတွင်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စွဲအကြားအသင်းအဖွဲ့အပေါ်အဓိကအားအလေးပေးဒါပေမယ့်လည်းအဆိုပြုထားယူဆချက်ကိုထောကျပံ့ဖို့ကျယ်ပြန့်တိရိစ္ဆာန်စာပေထားပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်၎င်း၏အာရုံကြောကျောထောက်နောက်ခံပြု၏တစ်ဦးနှင့်အဓိပ္ပါယ်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုအပေါ်တိကျတဲ့အလေးပေးနှင့်အတူပေးအပ်သည်။ အစောပိုင်း-ကလေးဘဝနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဒုက္ခနှင့်စွဲလမ်း၏အန္တရာယ်ချိတ်ဆက်ခိုင်မာတဲ့ epidemiological သက်သေအထောက်အထားများ၏အခြေအနေတွင်, ဒီအသင်းအဖွဲ့အခြေခံ putative ယန္တရားများထောက်ပြကြောင်းအခြေခံနှင့်လူ့သုတေသနကနေရလဒ်တွေကိုတင်ပြကြသည်။ တစ်ဦးကဝေဖန်အခန်းကဏ္ဍစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲလမ်းအန္တရာယ်အကြားအသင်းအဖွဲ့အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်အလိုဆန္ဒများ / Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်အပါအဝင်သပ္ပါယ်သင်ယူမှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုပါဝင်ပတ်သက် prefrontal ဆားကစ်အဘို့မြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အများအပြားမေးခွန်းများကိုစိတ်ဖိစီးမှု-related စွဲစွန့်စားမှုဥာဏ်ကိုအတွက်အဖြေမရတဲ့ရှိနေဆဲ, ဤအနာဂတ်သုတေသနအကြောင်းကြားနိုင်ရန်အတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်လျက်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အထူးသဖြင့် relapse အန္တရာယ်မှလေးစားမှုနဲ့အတူစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအပေါ်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်နေကြသည်။ လက်တွေ့ setting တွင်စိတ်ဖိစီးမှု-related relapse အန္တရာယ် addressing အတွက်အနာဂတ်လမ်းညွန်ကိုလည်းဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။
အဆိုပါဝေါဟာရကို "စိတ်ဖိစီးမှု" အတွေ့အကြုံများကိုစိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်ဇီဝကမ္မစိန်ခေါ်မှုဖြစ်နှင့် homeostasis.1- ပြန်လည်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်သပ္ပါယ်ဖြစ်စဉ်များကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျအမြင်, အကဲဖြတ်ခြင်း, အန္တရာယ်တုံ့ပြန်, ခြိမ်းခြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ် stimuli.3-2,4 နှငျ့ပတျသကျသောဖြစ်စဉ်များကိုရည်ညွှန်းသည် စိတ်ခံစားမှုဖိအား၏6ဥပမာလူ့ပဋိပက္ခ, ဆက်ဆံရေးဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုနီးကပ်မိသားစုဝင်၏သေခြင်းနှင့်ကလေးတစ်ဦး၏ဆုံးရှုံးမှုများပါဝင်သည်။ ဘုံဇီဝကမ္မဖိအားငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုသို့မဟုတ်အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့, အိပ်ရေးပျက်သို့မဟုတ်အိပ်မပျော်, အစွန်းရောက် hyper- သို့မဟုတ် hypothermia နှင့်မူးယစ်ဆေးဆုတ်ခွာပြည်နယ်များဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင်များစွာသော psychoactive မူးယစ်ဆေးပုံမှန်အစည်းအဝေးများနှင့်မူးရူးအသုံးပြုမှု pharmacological ဖိအားအဖြစ်ဝတ်ပြုကြလော့။ စိတ်ကူးဒီလိုသက်ရှိများအပေါ်တောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်ဝန်ကွိုးစားအားထုကြောင်း (1) ပြည်တွင်းရေးနှင့်ပြင်ပဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏သီးခြားထည့်သွင်းစဉ်းစားခွင့်ပြုပါတယ်, (2) ကိုတောင်းဆိုချက်များကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်တောင်းဆိုချက်များကို (အကဲဖြတ်) နဲ့ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှသပ္ပါယ်အရင်းအမြစ်များရရှိနိုင်မှုကိုအကဲဖြတ်သောအာရုံကြောဖြစ်စဉ်များ; သက်ရှိများမှစိတ်ဖိစီးမှုအချက်ပြကြောင်း (3) က, ပုဂ္ဂလဒိဋ္အမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်မှု; နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဆက်စပ်စိတ်ခံစားမှုနဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးဦးနှောက်စနစ်များအတွက် (4) neuroadaptations; ဖိအားတုံ့ပြန်မှုအတွက်နှင့် (5) အမူအကျင့်, သိမြင်မှုနှင့်ဇီဝကမ္မလိုက်လျောညီထွေ။
စိတ်ဖိစီးမှုမကြာခဏအနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်နေစဉ်, ဒါကြောင့်အတန်အသင့်စိန်ခေါ်မှုပေမယ့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတစ်အသိ generate ကြောင်းသိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကြာချိန်နှင့်ရလဒ်များကိုအတွက်ကန့်သတ်ပျော့ဖြစ်ကြောင်းပြင်ပနှင့်ပြည်တွင်းလှုံ့ဆော်မှုအပေါ်အခြေခံပြီးသော "ကောင်းသောစိတ်ဖိစီးမှု" / ပါဝင်နိုင်ပါသည်နှင့် အောင်မြင်ခြင်းနှင့်သာယာသောနှင့် exciting.1,3,6,7 ထိုသို့သောအခြေအနေများအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်ပါတယ်လုံလောက်သောစိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားရလဒ်များအောင်မြင်ရန် functioning နဲ့ homeostasis.3,6,8 အပေါ်သို့သော်ပိုပြီးစိတ်ဖိစီးမှု-ဥပမာ, အချိန်ကြာမြင့်စွာထပ်ခါတလဲလဲ, ဒါမှမဟုတ်နာတာရှည်, နှင့်ဆက်စပ်ဤသို့ဖော်ပြသည်အားကိုး အဆိုပါစိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေကိုဒုက္ခဆင်းရဲ- သာ. ဟာထိန်းအကွပ်မဲ့ခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းရခက်၏ပြင်းထန်မှုသို့မဟုတ်ဇွဲတိုးတက်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာသို့မဟုတ်အလိုက်အထိုက်နေတတ်၏အသိကိုလျှော့ချ, နှင့်ပိုမိုမြဲ homeostatic dysregulation.1,6,9-11 များအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်စွန့်စားမှုများ၏ပြင်းအားထို့ကြောင့်ပြင်းထန်မှု၏ရှုထောင့် , control, ကြိုတင်ခန့်မှန်း, ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာနှင့်အလိုက်အထိုက်နေတတ် understa အတွက်အရေးကြီးလှသည် ထိုကဲ့သို့သောစွဲအဖြစ် maladaptive အပြုအမူတွေ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍကို nding ။
စိတ်ဖိစီးမှု၏အမြင်နှင့်အကဲဖြတ်သည့်ဖြန်ဖြေတိကျတဲ့အတွက်တင်ပြပြင်ပသို့မဟုတ်ပြည်တွင်းရေးလှုံ့ဆော်မှု၏ရှုထောင့်, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ, (တစ်ဦးချင်းစီ၏ဇီဝကမ္မအခွအေနေအပါအဝင်) ပြည်တွင်းရေးအရင်းအမြစ်များရရှိနိုင်မှု, (ယုံကြည်ချက်တွေနဲ့မျှော်လင့်ထားအပါအဝင်) မတိုင်မီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်နှင့်တိကျသောဦးနှောက်ဒေသများပေါ်တွင်မူတည် စိတ်ပျက်စရာများနှင့်ရလဒ်ဇီဝကမ္မ, အမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်သပ္ပါယ်တုံ့ပြန်မှုအဖြစ်လှုံ့ဆော်မှု၏အကဲဖြတ်။ ထိုကဲ့သို့သော amygdala, hippocampus, insula နှင့် orbitofrontal, medial prefrontal နှင့် cingulate cortical အဖြစ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလှုံ့ဆော်မှုများ၏အမြင်နှင့်အကဲဖြတ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်, ထိုဦးနှောက်ကို stem (locus ceruleus နှင့်ဆက်စပ် arousal ဒေသများ), hypothalamus, thalamus, striatal နှင့် limbic ဒေသများဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ အတူတူကဤဒေသများရောက်သောအတွေ့အကြုံမှကူညီသည်။ ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုအမည်ရနောက်ပိုင်းတွင်မှ cortisol / corticosterone ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုလှုံ့ဆော်သော anterior pituitary ထံမှ adrenocorticotrophin ဟော်မုန်းလှုံ့ဆော်သော hypothalamus, ၏ paraventricular နျူကလိယ (PVN) မှဖြန့်ချိလွှတ်အချက် (CRF) corticotropin, နှစ်ခုအဓိကစိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်းမှတဆင့်ထင်ရှားကြသည် adrenal ဂလင်းနှင့်, sympathoadrenal medulary (SAM) systems.4,12 ကနေတဆင့်ညှိနှိုင်းသောကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်,
ထို့အပြင်ခုနှစ်, CRF အဆိုပါ corticostriatal-limbic ဒေသများဖြတ်ပြီး extrahypothalamic ဒေသများတွင်ကျယ်ပြန့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိပြီးပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုပြောင်းလဲပစ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအထူးသဖြင့် noradrenaline, ထို့အပွငျအလယ်ပိုင်း catecholamines responses.13 ကစားနဲ့ dopamine, ထိုအပါအဝင်ဦးနှောက်စိတ်ခွန်အားနိုးလမ်းကြောင်း (ပြောင်းလဲပစ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် tegmental ဧရိယာသို့မဟုတ် VTA ventral, နျူကလိယ [NAc] accumbens, နှင့် medial prefrontal [mPFC] ဒေသများ) ဒုက္ခဆင်းရဲကိုထိန်းညှိအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်း, သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအားထုတ်နှင့်လိုက်လျောညီထွေနှင့် homeostasis.8,14,15 အဆိုပါ hypothalamic များအတွက်အရေးပါအမူအကျင့်များနှင့်သိမြင်မှုတုံ့ပြန်မှုညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် extrahypothalamic CRF လမ်းကြောင်းနှင့်ဗဟို catechoamines ပြင်းထန်စွာ adapter နဲ့ homeostatic ဖြစ်စဉ်များကိုထိခိုက်ဖို့ဦးနှောက်စိတ်ခွန်အားနိုးလမ်းကြောင်းပစ်မှတ်ထား။ ဥပမာ, medial prefrontal cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများ, ထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ဟန့်တား Impulses သတင်းပို့, ဒုက္ခဆင်းရဲကိုထိန်းညှိ, အာရုံစူးစိုက်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲ, အပြုအမူစောင့်ကြည့်, အချိန်ကျော်အပြုအမူတွေနှင့်အကျိုးဆက်များကိုချိတ်ဆက်, သရုပ်ဆောင်မတိုင်မီအခြားနည်းလမ်းစဉ်းစားအဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားသိမြင်မှုသို့မဟုတ်အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု functions များ, တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ responses.16,17 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အမူအကျင့်သိပ္ပံပညာရှင်များလှပသောစိတ်ခံစားမှုနှင့်ဇီဝကမ္မစိတ်ဖိစီးမှုတွေတိုးလာအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူသို့မဟုတ်အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ကြောင်းပြသကြ Impulse ၌၎င်း, ဒုက္ခဆင်းရဲများတိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်တိုးအတွက်လျော့နည်းအဲဒီမှာဖြစ်ပြီး, စိတ်ဖိစီးမှုများနာတာရှည် maladaptive behaviors.18-27 Neurobiological သက်သေအထောက်အထားစိတ်ဖိစီးမှုတွေတိုးလာအဆင့်ဆင့်အတူ prefrontal လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်လျော့နည်းသွားရှိကွောငျးဖျောပွထားသနှင့်, ထိုစိတ်ခွန်အားနိုးဦးနှောက်ထို့ကြောင့်အနိမ့်အမူအကျင့်များနှင့်သိမြင်မှု control.28,29 မှုတွေကိုဖြစ်စေသည့်တုံ့ပြန် limbic-striatal အဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း, သာ. ကြီးမြတ်အန္တရာယ် လမ်းကြောင်းဦးနှောက် stre ၏သော့ချက်ပစ်မှတ်များမှာ စက္ကန့ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစွဲအားနည်းချက်အပေါ်သက်ရောက်မှုသောအရေးပါသောအလားအလာယန္တရားသည်။
စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲလမ်းတ္ထုများ (ပြန်လည်သုံးသပ် see30) အလွဲသုံးစားဖို့လှုံ့ဆျောမှုအကြားသိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့အပေါ်သိသိသာသာစာပေရှိပါသည်။ စွဲလမ်း၏အဓိကသီအိုရီထဲကအတော်များများလည်းစွဲဖြစ်စဉ်များအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုဖော်ထုတ်ရန်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်စေရန်ဆေး, တင်းမာမှုလျှော့ချဖို့, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်နှင့်ဆုတ်ခွာ-related ဒုက္ခဆင်းရဲကိုလျော့ချဖို့တစ်ဦးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမဟာဗျူဟာအဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရှုမြင်ကြောင်းစွဲလမ်း၏မော်ဒယ်များနှင့်အလွဲသုံးစားမှုဤအကွာအဝေး, 31-37 မက်လုံးပေးထိခိုက်စေစိတ်ဖိစီးမှုအဆိုပြုကြောင်း neurobiological မော်ဒယ်များမှ ဆုလာဘ်, သင်ယူမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်းအတွက် neuroadaptations တဏှာ, ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးများနှင့်မလှူ, ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းနာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းမှတ္ထုများ၏ပေါ့ပေါ့အသုံးပြုမှုကနေအကူးအပြောင်းအတွက်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းများ, အဓိကအင်္ဂါရပ်မြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါကိုဘယ်လိုရှင်းပြဖို့ allostasis သဘောတရားများ ဤအပိုင်းကိုခုနှစ်တွင် addiction.38-40 ၏, ငါတို့စိတ်ဖိစီးမှုစွဲအားနည်းချက်တိုးမြှင့်အတွက်ကစားသောအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှညွှန်ပြကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများ၏ဆုံလိုင်းများပြန်လည်သုံးသပ်။
လူဦးရေ-based နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခ, အကျိုးသက်ရောက်စေအနုတ်လက္ခဏာနှင့်နာတာရှည်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်စွဲအားနည်းချက်အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့ထောက်ပံ့လက်တွေ့လေ့လာမှုများအနေဖြင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ ဒီဧရိယာအတွက်သက်သေအထောက်အထားသုံးခုကျယ်ပြန့်အမျိုးအစားများခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးအမွငျ့မားမကြာသေးမီအနုတ်လက္ခဏာဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့်ရင်ဆိုင်နေရမြီးကောင်ပေါက်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောမိဘများ၏ဆုံးရှုံးမှု, မိဘကွာရှင်းနှင့်ပဋိပက္ခ, အနိမ့်မိဘထောက်ခံမှု, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှု, စိတ်ခံစားမှုအဖြစ် abuse.41-55 အပျက်သဘောဆောင်သောဘဝဖြစ်ရပ်များပြသသောသရုပ်ပြအလားအလာလေ့လာမှုများလည်းပါဝင်သည် အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လျစ်လျူရှု, အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ deviant ဆက်နွယ်မှုများနှင့် Single-မိဘမိသားစုဖွဲ့စည်းပုံမှာအားလုံးဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုတိုးမြှင့်စွန့်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်ပါပြီ။
သက်သေအထောက်အထား၏ဒုတိယအမျိုးအစားစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်မတရားသဖွငျ့, အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်, နာတာရှည်ဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ်အကြားအသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ လွှမ်းမိုးသောသက်သေအထောက်အထားမကြာသေးမီအနုတ်လက္ခဏာဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုတစ်ခုချင်းစီကိုစွဲ vulnerability.56 အပေါ်အတန်ငယ်လွတ်လပ်သောအန္တရာယ်ကွိုးစားအားထုအချို့သက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်အနေနဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်သားကောင်အကြားပိုမိုအသင်းအဖွဲ့နှင့်တိုးပွားလာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့် abuse.60-58 များအတွက်တည်ရှိ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုအပြင်, အနုတ်လက္ခဏာကိုထိခိုက်ခြင်းနှင့်နာတာရှည်ဒုက္ခဆင်းရဲပြည်နယ်များစွဲအားနည်းချက်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ တွေ့ရှိချက်အမူအကျင့်အမူအကျင့်ပြဿနာများ, အများအပြားလေ့လာမှုများလည်း Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ (PTSD) အပါအဝင်စိတ်ဓါတ်များနှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်၏ပျံ့နှံ့မှုအကြားသိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ပြသကြပါပြီဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု risk.61-67 နှင့်ဆက်စပ်သည်ကဒေါသအနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုများအပါအဝင်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေသည်ဟုညွှန်ပြ စိတ်ဖိစီးမှုသိသိသာသာစိတ်ဓါတ်များနှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်၏ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်နာတာရှည်စိတ်ရောဂါဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်ဆက်စပ်နေသည်နှင့်အမျှနှင့် 68 နာတာရှည်ဒုက္ခဆင်းရဲပြည်နယ်များအတွက်သိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့များအတွက်အကြီးအကျယ်အကောင့်စေခြင်းငှါဤအသင်းအဖွဲ့များစိတ်ရောဂါမမှန် conceptualized ရှိမရှိ၏ပြဿနာမြှင့်, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း disorders.78-79,80 ၏အန္တရာယ်တိုးလာ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြား။
လူဦးရေလေ့လာမှုများအနေဖြင့်အထောက်အထား၏တတိယအမျိုးအစားများတွင်မကြာသေးမီကသုတေသနပြုတစ်သက်တာဖိအားထိတွေ့မှုနှင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြေးပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးရေး, ကျား, မ, လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ, ကြိုတင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုအဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုအချက်များတစ်အရေအတွက်စာရင်းကိုင်ပြီးနောက်စွဲအားနည်းချက်အပေါ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာဒုက္ခ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ထားပါတယ်, စိတ်ရောဂါမမှန်၏ပျံ့နှံ့မှု, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏မိသားစုသမိုင်းနှင့်အမူအကျင့်များနှင့် problems.81,82 တိုးပွားလာသောဒုက္ခသို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှု conduction တစ်စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးအကဲဖြတ်နှင့်သက်တမ်းကာလအတွင်းပေးထားသောကာလ၌ကြုံတွေ့ခဲ့ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ရပ်များ၏နံပါတ်ရေတွက်ခြင်းဖြင့်ခံခဲ့ရသည်။ distal (ဖြစ်ရပ်များကြိုတင် 1 တစ်နှစ်ထက်ပိုမိုဖြစ်ပေါ်) နှင့် Proximity စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများ (လတ်တလော 1 နှစ်ကာလအတွင်းဖြစ်ရပ်များ), နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်စံတွေ့ဆုံအပေါ်၎င်းတို့၏သက်ရောက်မှုကိုလည်းအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်များ၏သက်ရောက်မှုများ။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ရပ်များများ၏စုပေါင်းအရေအတွက်ကိုပင်ထိန်းချုပ်မှုအချက်များအဘို့အစာရင်းကိုင်ပြီးနောက်တစ်ထိုး-မှီခိုထုံးစံ၌အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခို၏သိသိသာသာကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။ သိသိသာသာနဲ့လွတ်လပ်စွာစွဲအားနည်းချက်ထိခိုက် distal နှင့် Proximity ဖြစ်ရပ်များနှစ်ဦးစလုံး။ ထို့အပွငျစွဲများအတွက်အန္တရာယ်အပေါ်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာဖိအား၏ဆေးထိုး-မှီခိုသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးလိင်အဘို့နှင့်အာဖရိက-အမေရိကန်ကော့ကေးဆပ်, အဟစ်စပန်းနစ်ပြိုင်ပွဲ / တိုင်းရင်းသားအုပ်စုများအဘို့ရှိခဲ့သညျ။ သိသိသာသာစွဲလမ်းအားနည်းချက်နဲ့ဆက်စပ်ဆိုးရွားသောဖြစ်ရပ်များအမျိုးအစားများမိဘကွာရှင်းသို့မဟုတ်ပဋိပက္ခ, စွန့်ခွာ, မိဘနှင့်ကင်းအသက်ရှင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေ, သေခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်သူငယ်၏ဆုံးရှုံးမှု, သိသာသည်အခြား၏သစ်စာမဲ့, သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မှနေအိမ်ဆုံးရှုံးတစ်ဦးအနီးကပ်တဦးတည်း၏အသေခံခြင်းရှိကြ၏ , စိတ်ခံစားမှုအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်လစ်လျူရှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု, မုဒိမ်းမှု, မိဘအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှု, အိမ်စောင့်, မိသားစုအဖွဲ့ဝင်, အိမ်ထောင်ဖက်, ဒါမှမဟုတ်သိသိသာသာအခြားသေနတ်ပစ်ခတ်မှုသို့မဟုတ်အခြားအကြမ်းဖက်ပြုမူသောအမှုသားကောင်နှင့်အကြမ်းဖက်သားကောင်စောင့်ကြည့်။ ဤရွေ့ကားသဘာဝပုံမှန်အားဖြင့်မထိန်းချုပ်နဲ့ခန့်မှန်းရခက်သောအလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ရပ်များ, ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ စားပွဲတင် 1 ဘဝဖြစ်ရပ်များ, နာတာရှည်ဖိအား, မတရားသဖွငျ့နှင့်စွဲလမ်းအန္တရာယ်နှင့်ဆက်စပ်တစ်ဦးချင်းအဆင့်ကို variable တွေကိုအမျိုးအစားများအကျဉ်းချုပ်။
ဆိုးရွားသောဘဝကပွဲများအမျိုးအစားများ, စိတ်ဒဏ်ရာ, နာတာရှည်ဖိအားများနှင့်တစ်ဦးချင်းအဆင့် Variables ကိုစွဲလမ်းအန္တရာယ်၏ခန့်မှန်း
စိတ်ဖိစီးမှု Exposure Initiative နှင့်မူးယစ်ဆေးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး၏စက်လှေကားတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
စိတ်ဖိစီးမှုမှစူးရှသောထိတွေ့မှုစတင်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏တင်းမာမှုများနှင့်အလွဲသုံးစားမှု (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအတွက် see30,83) တိုးပွါးသောအယူအဆကိုထောကျပံ့ဖို့တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်အချို့သက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လူမှုရေး, ရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှု, လူမှုရေးအထီးကျန်မှုတွေ, tailpinch နှင့်ခြေလျင်-shock, ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အသစ်အဆန်းစိတ်ဖိစီးမှုမျိုးဗီဇ, ဖိအားအမျိုးအစားသက်ဆိုင်သောအတွက်အသိပေးချက်အတူ opiates ၏ဝယ်ယူ, အရက်နှင့် psychostimulant Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်ဖို့လူသိများကြသည် တိရစ္ဆာန်များ၏နောက်ခံနှင့် (ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများအတွက် see84-87) မူးယစ်ဆေးအမျိုးအစားအားဖြင့်များပါတယ်။ အချို့အပျက်သဘောတွေ့ရှိချက်ရှိပါတယ်ပေမယ်ဒါ့အပြင်အခြားသက်သေအထောက်အထားများ / အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှု, ထိုကဲ့သို့သောမွေးကင်းစကလေးများအထီးကျန်မှုတွေသို့မဟုတ်မိခင်ခွဲခြာအဖြစ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသုံးပြီးနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများကိုယ်စားပြုတာရှညျနဲ့ထပ်ခါတလဲလဲဖိအား, နီကိုတင်း, psychostimulants နှင့်အရက်၏ Self-အုပ်ချုပ်ရေးတိုးမြှင့်ကြောင်းဖော်ပြသည်နှင့် သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏စူးရှသောအမူအကျင့် effects.88-93 သိသာတာကတော့လိင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှုမှစိတ်ဖိစီးမှု-related sensitivity ကိုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေး Self-administration.93-97 ၏ဖိစီးမှုကိုတိုးမြှင့်အတွက်သိသိသာသာအထောက်အထားအလားအလာကနေလည်းမရှိနဲ့ longitudinal လေ့လာမှုများမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုစတင်များနှင့်တင်းမာမှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏သက်ရောက်မှုကိုထောကျပံ့ဖို့နဲ့ငယ်ရွယ် adults.24,98-109 ထို့အပြင်ဆန်းစစ် addiction.74,110-114 ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများ၏တိုးမြှင့်စွန့်စားမှုအပေါ်အစောပိုင်းစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်မတရားသဖွငျ့၏ဆိုးကျိုးများအတွက်လိင်ကွဲပြားမှုရှိပါတယ် မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုထိုကဲ့သို့သောအရက်နှင့်နီကိုတင်းအဖြစ်ဥပဒေရေးရာမူးယစ်ဆေးဝါးများကန့်သတ်နေကြတယ်, ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, အဲဒီမှာစိတ်ဖိစီးမှု (ပြန်လည်သုံးသပ် see83) အရက်သောက်ခြင်းနှင့်နီကိုတင်းဆေးလိပ်သောက်တိုးပွါးကြောင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အရက်သောက်သမိုင်း၏ဆိုးကျိုးများ, ဒုက္ခသမိုင်း, လူမှုရေးစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်မျှော်လင့်ချက်များကဤစမ်းသပ်လေ့လာမှုများအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှလူသိများကြသည်။
မတူကွဲပြားသောချဉ်းကပ် အသုံးပြု. သက်သေအထောက်အထားစွဲ၏အန္တရာယ်အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှု၏ထောက်ခံမှုအတွက်စုဆောင်းထားသည်နှင့်အမျှဤအပိုင်းကိုကြမ်းတမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် activated စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းအကြား neurobiological လင့်များအပေါ်သုတေသနပြုကို examine ။ ဒါဟာကောင်းစွာအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်ဂုဏ်သတ္တိများ dopamine အာရုံခံအဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှနှင့် ventral striatum နှင့် prefrontal cortex (PFC) အားတိုးချဲ့ပါဝင်သည်သော mesolimbic dopaminergic (DA) လမ်းကြောင်း, သူတို့ရဲ့ activation ပါဝင်ကြောင်းလူသိများသည် .115- 117 ဒီလမ်းကြောင်းကိုလည်းလှုံ့ဆော်မှုမှ salience တာဝန်ပေးဖို့အတွက်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၌၎င်း, သင်ယူမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့် psychostimulants, အရက်, opioids နှင့်နီကိုတင်းအပေါငျးတို့သကိုသက်ဝင်အဖြစ် adaptation.14,118 လူ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကိုလည်းမူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်တွင်ဤစနစ်များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုထောကျပံ့တာဖြစ်ပါတယ် mesolimbic DA စနစ်များ, အထူးသဖြင့်, ထို ventral နှင့် dorsal striatum နှင့်ထိုကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုမြင့်မားသို့မဟုတ် Euphoria ပီတိမူးယစ်ဆေး ratings နှင့် craving.119-126 နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်
သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုနှင့် glucocorticoids ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့် (GC) ကိုလည်း adrenalectomy အားဖြင့် GC ၏ NAc.127-132 နှိမ်နင်းရေးအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်ရန်သို့သော်ငြားလည်း Basal အခြေအနေများအောက်တွင်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့် psychostimulants.131,133 မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် dopamine ၏ extracellular အဆင့်နာတာရှည် GC တားစီးမှုကိုလျော့နည်းစေ အဆိုပါ NAc အတွက် DA ပေါင်းစပ်နှင့်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်, 134 အဆိုပါ hypothalamic-pituitary-adrenal မြားတှငျပွောငျးလဲ (HPA) ဝင်ရိုးနှင့် glucocorticoids သိသိသာသာ DA ဂီယာကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုအကြံပြု။ အလွဲသုံးစားမှု, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် CRF နှင့် glucocorticoids အတွက် concomitant တိုး၏မူးယစ်ဆေးအလှည့်အတွက် neurons.135-138 လူ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများထပ်မံကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related တိုးပြသကြ dopaminergic ၏လှုပ်ရှားမှုပိုကောင်းစေပါတယ်သော VTA အတွက်အချိုမှုလှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်နှင့်တူကြောင်းအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ် cortisol အတွက် 125,139, အ ventral striatum အတွက် dopamine စုဆောင်းခြင်းနဲ့ဆက်စပ်နှင့်အချို့သောသက်သေအထောက်အထားလည်း cortisol အတွက်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်တိုးနှစ်ဦးစလုံး dopamine အဆိုပါ ventral striatum အတွက် binding နှင့်နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ဖိစီးအားစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် euphoria.140 ၏ ratings နှင့်အတူသူနဲ့ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသနေကြသည်နှင့် အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး mesolimbic လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်သောကြောင့် VTA dopamine အာရုံခံနှင့် medial prefrontal cortex.87,136,141,142 အတွက် morphological အပြောင်းအလဲများအတွက် Synaptic အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်စီရလဒ်များကိုကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး
ဆုလာဘ်တစ်ခုအခန်းကဏ္ဍအပြင်, လူ့ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့် preclinical အချက်အလက်များ၏တစ်ကြီးထွားလာခန္ဓာကိုယ် ventral striatum လည်းဆန္ဒရှိအေးစက်အတွက်ဆန္ဒရှိ, နာကျင်မှုလှုံ့ဆော်မှုများ၏အတွေ့အကြုံကို၌၎င်း, ဆန္ဒရှိ stimuli.143-146 ထိုသို့သောသက်သေအထောက်အထားအတွက်မျှော်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းညွှန်ပြ ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့တဘက် mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းများအတွက်အခန်းကဏ္ဍမှအချက်များနှင့်ပိုပြီးအမြင်ကျယ်အဓိကစဉ်အတွင်းအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုမှလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကပါဝငျတ (ဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်) events.147-150 ထို့အပြင်နောက်ထပ်ဒေသများအတွက် mesolimbic DA လမ်းကြောင်းနဲ့ချိတ်ဆက်နှင့်ပါဝင်ပတ်သက် ဆုလာဘ်, အဲဒီဒေသများ regions.118,151, အ mesolimbic DA လမ်းကြောင်းအတူ interoception, စိတ်ခံစားမှုများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်သင်ယူခြင်းနှင့်သပ္ပါယ်ခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေဟာ amygdala, hippocampus, insula နှင့်ဆက်စပ် corticolimbic ဖြစ်ကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် abuse.29,152 ၏မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏စွဲလမ်းဂုဏ်သတ္တိများအတွက်
သုတေသနကိုလည်းမူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးဝယ်ယူအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-related တိုး corticosterone (လူသားတွေအတွက် cortisol) ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်များ, HPA-activated corticosterone လွှတ်ပေးရန်မူးယစ်ဆေး Self-administration.131,153-155 Corticosterone အုပ်ချုပ်ရေးလည်းထို့အပွငျကိုကင်းနှင့်အ morphine.156 ၏ psychomotor လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်၏ဝယ်ယူဘို့အရေးကြီးပါတယ်, အ VTA သို့ထိုးသွင်း GC အဲဒီ receptor ရန်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှုလျော့ကြောင်းညွှန်ပြ အဆိုပါ VTA အတွက် GC receptors ၏လှုပ်ရှားမှုအကြံပြုခြင်း 157 dopamine-မှီခိုအပြုအမူသက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေနိုင်ဘူး။ အဆိုပါထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်းဗီဇပြ၏ဖျက်မှုနှင့်အတူကြွက်တွေ Self-စီမံခန့်ခွဲ cocaine.158 ဖို့လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုထိုး-မှီခိုကျဆင်းခြင်းအဲဒီဒေတာ HPA-related corticosterone လွှတ်ပေးရေးမှာအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်မြင်ပြီ dopamine တိုးဖျန်ဖြေနိုင်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
nonhuman မျောက်ဝံများအတွက် cortisol, dopamine, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအကြား link ကိုအစီရင်ခံတင်ပြရသေးပေမယ့်လူမှုရေး, လက်အောက်ငယ်သားနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ဖိစီးမှု D2 receptors ၏အောက်ခြေအဆင့်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားလည်းမရှိနှင့်အဆင့်မြင့်ကိုကင်း Self-administration.159 လူသားမြားသညျတှငျ, အပြုသဘော [11C] raclopride သုံးပြီးထုတ်လွှတ် tomography (PET) လေ့လာမှုများစူးရှသောစိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့ခြင်းဟာ ventral striatum (VS) တွင် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးပွါးကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သေးငယ်တဲ့-နမူနာလေ့လာမှုအတွက် Pruessner နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2004) 139 အနိမ့်အစောပိုငျးတှငျဘဝမိခင်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီ၏သမိုင်းကြောင်းနှင့်အတူသူတို့အားနှိုင်းယှဉ်ပါကတစ်ဦးစူးရှသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုတာဝန်စဉ်အတွင်း ventral striatum အတွက် သာ. ကြီးမြတ် dopamine လွှတ်ပေးရန်ပြသတွေ့ရှိခဲ့ မြင့်မားသောအစောပိုင်းဘဝမိခင်စောင့်ရှောက်မှု။ ထို့ပြင်စိတ်ဖိစီးမှုတာဝန်စဉ်အတွင်း cortisol တုံ့ပြန်မှု VS dopamine လွှတ်ပေးရန်မှ (r = .78) သိသိသာသာဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ Oswald နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2005) 125 လည်းစူးရှစိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှု-related ပုဂ္ဂလဒိဋ္ "မြင့်သော" တုံ့ပြန်မှုနှင့် VS အတွက် dopamine အတွက် concomitant တိုးတစ်ခုချင်းစီကိုသိသိသာသာစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် cortisol တုံ့ပြန်မှုနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤအဒေတာစိတ်ဖိစီးမှု / cortisol နှင့် dopamine ဂီယာအကြား link ကိုထောကျပံ့ပေးပေမယ့်ကပိုမကြာသေးမီက, တူညီတဲ့အုပ်စုတစ်စုကိုလည်းတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု task.140 သုံးပြီးစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုချိတ်ဆက်လူ့သုတေသန VS အတွက် cortisol ပမာဏနှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်အကြားအလားတူသိသိသာသာဆက်ဆံရေးဟာပြတော်မူပြီ VS လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ် dopamine binding နှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူများ၏အန္တရာယ်တိုက်ရိုက်စိတ်ဖိစီးမှု, mesolimbic dopamine နှင့်စွဲလမ်းအန္တရာယ်အကြားအသင်းအဖွဲ့တည်ထောင်ရန်လိုအပ်သည်။
အစောပိုင်းဘဝနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု, Dopamine စနစ်များ, နှင့်ဆေးဝါးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး
အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုသိသိသာသာ mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းထိခိုက်စေခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းအခြေခံသိပ္ပံလေ့လာမှုများကနေကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲနှင့်လူကြီးများ stress.11 ထိုသို့သောဇီဝကမ္မနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကိုမှပုံကြီးချဲ့ HPA နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုအတွက်ပြောင်းလဲ CRF mRNA စကားရပ်နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်ကိုပြသအဖြစ်မွေးကင်းစကလေးများကြွက်များတွင်မိခင်ခွဲခြာ (က MS) ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့မှုသိသိသာသာအဲဒီတိရိစ္ဆာန်များအလယ်ပိုင်း CRF pathways.160,161 ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုပွောငျးလဲ အဆိုပါ PVN, အ locus ceruleus (LC) တွင် CRF ကဲ့သို့ immunoreactivity တိုးတက်သဖြင့်, LC အတွက် CRF အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်နှင့် The အရွယ်ရောက်တိရိစ္ဆာန်များ nuclei.11 raphe လည်းပြပွဲ, glucocorticoids မှအနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက် sensitivity ကိုလျော့နည်းသွား 162 နှင့်ဤအပြောင်းအလဲများကိုလျော့နည်းသွား GC ဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည် အဆိုပါ hippocampus နှင့်တိုကျရိုကျ cortex.11,163 အတွက်အဲဒီ receptor စကားရပ် LC အတွက် noradrenergic ဆဲလ်ခန္ဓာကိုယ်ဒေသများတွင်ဂါဘမြို့သားအဲဒီ receptor တွေလျော့နည်းသွားနှင့်ဗဟို benzodiazepine (CBZ) လျော့နည်းသွားသည့် LC နှင့် amygdala အတွက်အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်ကိုလည်း ပို. အရေးကြီးသည် reported.164 ပါပြီ, က MS ကြွက်သိသိသာသာပြသ တိုးမြှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အပြုအမူ sensitiz နှင့်အတူစူးရှသောကဖိစီးမှုမှမွငျ့မား DA တုံ့ပြန်မှု ation နှင့်အလွဲသုံးစားမှုစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများဒီလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive အဆိုပါ NAc အတွက် DA ၏တိုးမြှင်လွှတ်ပေးရန်, အောက်ပိုင်း NAc-Core နှင့် striatal DA Transporter က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်ဆက်စပ်နှင့် D11,143,165 အဲဒီ receptor binding က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် mRNA လျှော့ချဖြစ်ပါတယ် administration.3 psychostimulant မှကြံ့ခိုင်အပြုအမူာင်း ထို့အပြင်ခုနှစ်တွင် NAc shell.166-168 အတွက်အဆင့်ဆင့်, နာတာရှည် norepinephrine ချို့တဲ့ DA-အချက်ပြ pathways.169,170 မြားတှငျပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်သောနိုင်ာင်းဆင်တူအပြောင်းအလဲများကို induces
အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်တာရှညျနဲ့ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်းဆိုးရွားစွာ, maturation.171 အဆိုပါ PFC များအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွေ့အကြုံများအပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုသောဒေသဟာ prefrontal cortex ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်နှင့်အထူးသဖြင့်ညာဘက် PFC သည် HPA ဝင်ရိုးကိုသက်ဝင်အတွက်နှစ်ဦးစလုံးဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍ နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဥပမာကဤ responses.171 ထိန်းညှိအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုသည် ventromedial PFC ၏တွေ့ရှိရပါသည်တိုးမြှင် HPA နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်။ glucocorticoid receptors ၏မြင့်မားသောအဆင့်ဆင့်ကိုလည်း PFC တှငျတှေ့နှင့်ထို့အပွငျပု hippocampus.172,173 တွင်တွေ့မြင်ကြောင်းဆင်တူ PFC အာရုံခံ၏အံ့သြဖွယ် dendritic ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းစောစော postnatal က MS နှင့်ထဲမှာသညျ့မွငျ့မား Synaptic သိပ်သည်းဆလူမှုရေးအထီးကျန်ရလဒ်အတွက်နာတာရှည် GC ကုသမှုရလဒ်များကိုနေကြတယ် PFC နှင့် DA ၏ပြောင်းလဲသိပ်သည်းဆ serotonin (5-HT) ဆိပ်ကမ်းဟာ medial PFC.174 လူမှုရှုံးနိမ့်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း PFC ထံမှတုံ့ပြန်ချက်ပွောငျးလဲနှင့်ကလေးတို့ကိုမတရားသဖွငျ့စာရွက်စာတမ်း neuroendocrine အပြောင်းအလဲများကို၏ neurobiological သက်ရောက်မှုအပေါ်မူးယစ်ဆေး Self-administration.84 လူ့လေ့လာမှုများကိုအထောက်အကူပြုရန်တစ်လျှောက်လုံး အဖြစ်အရွယ်အစားနှင့် prefrontal ၏အသံအတိုးအကျယ်, thalamic နှင့်မတရားသဖွငျ့နှင့်အတူတကွ addiction.175,176 ၏စတင်နှင့်ဆက်စပ် cerebellar ဒေသများမြားတှငျပွောငျးလဲ, ဒီအခန်းမှာပေးအပ်ဒေတာစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူတွင်ပါဝင်ပတ်သက် mesolimbic နှင့် prefrontal ဒေသများအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုသက်ရောက်မှု၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ ထိန်းချုပ်မှု။
မြင့်မားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု Impulses သတင်းပို့ထိန်းချုပ်၏ဆုံးရှုံးမှုနှင့်မသင့်လျော်အပြုအမူတွေကိုတားစီးဖို့နဲ့ gratification.20,177,178 Neurobiological ဒေတာစိတ်ဖိစီးမှုအလှည့်အတွက် memory နဲ့ Self-ထိန်းချုပ်မှုအလုပ်လုပ်တူသောအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုချို့ယွင်းသော prefrontal ဆားကစ်၏ catecholamines မော်ဂျူချို့ယွင်းနေသောညွှန်ပြနှောင့်နှေးဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ 17,28,179 ရှိပါတယ်ကိုလည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုအန္တရာယ်နဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့နှင့် maladaptive သည်အခြားဖြစ်ပါတယ်စိတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းသွားနှင့် Self-ထိန်းချုပ်မှုလျော့နည်းသွားစားပွဲတင် 1 အတွက်စာရင်းဖိအားများစွာကြုံတွေ့ကြသူဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်အန္တရာယ်မှာမြီးကောင်ပေါက်ပြပွဲဖို့ပိုများပါတယ်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားကြီးထွားလာနေသည် ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုများအတွက်အန္တရာယ်မှာ behaviors.104,152,180,181 ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအဆိုပါ corticostriatal-limbic dopamine လမ်းကြောင်း Impulse နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ, အနိမ့်အမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုထိန်းချုပ်ဆင်းရဲသောဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့် deviant အပြုအမူပိုမိုအဆင့်ဆင့်ယုတ်လျော့ပါပြီသိနှင့် impulsivity.24,152,182-184 နေကြတယ် , ဆုံးဖြတ်ချက်ချနှင့်စွဲစွန့်စားမှု, 185,186 နှင့်ယခင်အပိုင်းအတွက်ဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း, ထိုကဲ့သို့သော VTA, NAc, PFC နှင့် amygdala အတိုင်းဤလမ်းကြောင်း၏တိကျသောဒေသများ, အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ဖိစီးမှု-related အချက်ပြနှင့်ပလပ်စတစ်ဖို့အလွန်အမင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြသည်။ မကြာသေးခင်ကပေပုံရိပ်လေ့လာမှုမှာတော့ Oswald (2007) 187 စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် striatal dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် Impulse ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မြင့်မားတဲ့ရို Impulse dopamine လွှတ်ပေးရန် VS တုံးညာဘက်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ညွှန်ပြ။ သို့သော်ဤသက်ရောက်မှုနာတာရှည်ဘဝဖြစ်ရပ်များစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့သိသာအပြန်အလှန်အားဖြင့်ပြုပြင်ထားသောခဲ့ကြသည်။ စိတ်ဖိစီးမှုများပုံမှန်မှအနိမ့်နှင့်အတူ, dopamine လွှတ်ပေးရန်မြင့်မားသောထကြွလွယ်သောဘာသာရပ်များအတွက်ထက်နိမ့်အတွက်ကြီးပေမယ့်မြင့်မားတဲ့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအနိမ့် DA လွှတ်ပေးရန်ပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် mesolimbic dopamine ဂီယာအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် Impulse ၏အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုကိုသရုပ်ပြနှင့်နှစ်ဦးစလုံးအချက်များဂရုတစိုက်အပြည့်အဝစွဲစွန့်စားမှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် Impulse ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်ရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်ဟူသောအချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။
ပုံ 1 စွဲအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုသက်ရောက်မှုတစ်ခုသိထားမော်ဒယ်တွေ့ရမယ်။ ဒါဟာတိကျတဲ့အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical တုံ့ပြန်မှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်အရာတို့အပေါ်မှာစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှစ်ဦးစလုံးအလွဲသုံးစားမှုလုပ်ရပ်များ၏ဘုံ neurobiological လမ်းကြောင်းဖော်ပြသည်။ ကော်လံတစ်ဦးကအားနည်းချက်အချက်များသုံးခုအမျိုးအစားများစာရင်းပြုစု: (1) ထိုသို့သောတိုကျရိုကျအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုဖွံ့ဖြိုးရေး, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှု, အမူအကျင့် / Self-ထိန်းချုပ်မှု, Impulse, ဒါမှမဟုတ်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအကြိုးသက်ရောက်မှုမှပြောင်းလဲကနဦး sensitivity ကိုအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ / တစ်ဦးချင်းစီ-Level အချက်များ; ထိုကဲ့သို့သောအစောပိုင်းဆိုးရွားသောဘဝဖြစ်ရပ်များ, စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ကလေးတို့ကိုမတရားသဖွငျ့အတွေ့အကြုံများ, အချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများအဖြစ် (2) စိတ်ဖိစီးမှု-related အားနည်းချက်အချက်များ; ဤအအချက်များတစ်ခုချင်းစီကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲထိခိုက်စေရန်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါကဒီမှာဆှေးနှေးခဲ့ပေမယ့်စွဲလမ်းမှုအန္တရာယ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု markers.3-188 အတွက်သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိရကြပြီမဟုတ်သည့်နှင့် (194) မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုနှင့် psychopathology နှင့်စွဲလမ်း၏မိသားစုသမိုင်း, စိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်သိမြင်မှုနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု (ကော်လံခ) ပါဝင်ပတ်သက် neurobiological လမ်းကြောင်း၌တည်၏။ မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာ levels118,195 မှာကဤလမ်းကြောင်းအတွက်တိကျတဲ့ Synaptic အပြောင်းအလဲများကိုအဆိုပါမော်ဒယ်၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများအကြံပြုကော်လံ C. အတွက်ကိုယ်စားပြု maladaptive အပြုအမူတွေ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ဖို့ကော်လံရသောစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအချက်များအားဖြင့်တစ်ဦးက interactive သည့်ယန္တရားများအတွက်အခြေခံများကို ဤအအားနည်းချက်အချက်များစွဲစွန့်စားမှုတိုးမြှင့်ကြောင်း maladaptive စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ Self-ထိန်းချုပ်မှုတုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်။ တိုးတုံ့ပြန်သည့် maladaptive စိတ်ဖိစီးမှုကဒီအန္တရာယ်အချိုမှုအားဖြင့် mesocorticolimbicstriatal dopamine လမ်းကြောင်းနှင့်၎င်း၏မော်ဂျူနှင့်အတူဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ်အတွက် dysregulation, အထူးသဖြင့် CRF နှင့် NE စနစ်များ, သူတို့၏ interaction ကကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့် GABA.114,196,197 ထို့ပြင်မကြာသေးမီသက်သေအထောက်အထားကြောင်းစိတ်ဖိစီးမှုအကြံပြုပေးသောအားဖြင့်တိကျသောယန္တရား ထိုကဲ့သို့သော neuropeptide (NPY) endocannabinoids အဖြစ် neuropeptides အပါအဝင်စည်းမျဉ်းမော်လီကျူးများ, နှင့် neuroactive steroids စွဲ vulnerability.198-203 အတွက်အခန်းကဏ္ဍ
ပုံ 1 (အခန်း)
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းကကမကထပြုခဲ့ကြသည်အပြုအမူနှင့် neurochemical တုံ့ပြန်မှုအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ကိုယ်စားပြုစွဲအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုသက်ရောက်မှု, တစ်သိထားမော်ဒယ်။ ကော်လံတစ်ဦးကအားနည်းချက်အချက်များသုံးခုအမျိုးအစားများစာရင်းပြုစု: (1) ထိုသို့သောတိုကျရိုကျအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုဖွံ့ဖြိုးရေး, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှု, အမူအကျင့် / ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းချုပ်, Impulse သို့မဟုတ်အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအကြိုးသက်ရောက်မှုမှပြောင်းလဲကနဦး sensitivity ကိုအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ / တစ်ဦးချင်းစီ-Level အချက်များ; ထိုကဲ့သို့သောအစောပိုင်းဆိုးရွားသောဘဝဖြစ်ရပ်များ, စိတ်ဒဏ်ရာနှင့်ကလေးတို့ကိုမတရားသဖွငျ့အတွေ့အကြုံများ, အချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံများအဖြစ် (2) စိတ်ဖိစီးမှု-related အားနည်းချက်အချက်များ; နှင့် (3) မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှုနှင့် psychopathology ၏မိသားစုသမိုင်း။ ဤအအချက်များတစ်ခုချင်းစီသိသိသာသာစိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်မှတ်ဥာဏ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက် neurobiological လမ်းကြောင်းများနှင့်အမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှု (ကော်လံ B) မှမြားတှငျပွောငျးလဲထိခိုက်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသြဇာလွှမ်းမိုး။ ထိုသို့သောအပြောင်းအလဲများကအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့တစ်ဦးချင်းစီစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုအခြေအနေများနှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်သောအခါကော်လံကို C အတွက်ကိုယ်စားပြု maladaptive အပြုအမူတွေ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ဖို့တစ်ဦးက interactive ကော်လံရသောစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်မျိုးရိုးဗီဇအချက်များအားဖြင့်ယန္တယားဖျန်ဖြေ။
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဆုကြေး Pathways အတွက်မူးယစ်ဆေးအသုံးပြုမှုနှင့်အလွဲသုံးမှုနှင့်အပြောင်းအလဲများ
acute ထိုကဲ့သို့သောအရက်, နီကိုတင်း, ကင်း, အမ်ဖီတမင်းအဖြစ်အများဆုံးနှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း (mesocorticolimbic dopaminergic စနစ်များ) ကိုသက်ဝင်ကြောင်းဆေးခြောက်ကိုလည်းအတွက်တိုးနှင့်အတူဦးနှောက်စိတ်ဖိစီးမှုလမ်းကြောင်း (CRF-HPA ဝင်ရိုးနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်လမ်းကြောင်း) ကိုသက်ဝင် ပလာစမာ adrenocorticotropic ဟော်မုန်း (ACTH) နှင့် corticosterone, နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးဖိအားအပြောင်းအလဲနှင့်အသားအရေ conduction responses.204-217 အခြားတစ်ဖက်တွင်, opiates မှစူးရှသောထိတွေ့မှုကဤမူးယစ်ဆေးဝါး humans.218,219 ပုံမှန်နှင့်နာတာရှည်အသုံးပြုမှုအတွက် cortisol ပမာဏလျော့ကျလည်းဖြစ်ပါတယ် မူးယစ်နေဖြင့်တိကျသောဖြစ်ကြောင်း, ဤစနစ်များအတွက် adapter နဲ့ဆက်နွယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ (HRV) တွင်အပြောင်းအလဲများပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့်နာတာရှည်အရက် use.220-222 ထောက် psychostimulants ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် HPA ဝင်ရိုး function ကိုအတွက်တိုး, နှင့်အမှု၌မူးယစ်ဆေး၏ inactivating သက်ရောက်မှုမှသည်းခံစိတ်နှင့်အတူအစီရင်ခံကြသည် မော်ဖင်းအကိုက်, နီကိုတင်းနှင့်အရက်ကိုလည်းဇီဝကမ္မစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးအဲဒီကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု pharmacological ဖိအားအဖြစ်၎င်းတို့၏ခွဲခြား support reported.223-226 ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၏
acute ဆုတ်ခွာပြည်နယ်များ (EPI) levels.38,211,216,227-231 အစောပိုင်း abstinence မြင့်မားသော Basal cortisol တုံ့ပြန်မှုနှင့်တုံးသို့မဟုတ်နှိမ်နင်း ACTH နဲ့ Cortisol နှင့်ဆက်စပ်နေသည် CSF, ပလာစမာ ACTH, cortisol, norepinephrine (NE), နှင့် epinephrine အတွက် CRF အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည် အရက်သမားနဲ့နာတာရှည်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် pharmacological နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုတုံ့ပြန်, metyrapone တုံ့ပြန် HPA ဟော်မုန်း၏ Hyper-response ထို့အပြင် opiate နှင့်ကိုကင်း addicts.232-236 အစီရင်ခံထားပါတယ်စဉ်နာတာရှည်အရက်ကနေဆုတ်ခွာနှင့် abstinence လည်းပြောင်းလဲစာနာနှင့်ဆက်စပ်သည်နှင့် parasympathetic တုံ့ပြန်မှု, 234,237-239 နှင့်ကိုကင်းကနေအစောပိုင်း abstinence အတွက် yohimbine စိန်ခေါ်မှုမှပြောင်းလဲ noradrenergic တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းအထက်အပြောင်းအလဲများအားလုံးဇီဝကမ္မစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ observed.240 ဖြစ်ခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးစူးရှသောအုပ်ချုပ်ရေး mesolimbic dopamine တိုးပွါးသော်လည်း, ကြမ်းတမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်စူးရှဆုတ်ခွာပြည်နယ် 241 ပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့်နာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုနှိမ့်ချ Basal အတွက်လျှောက်လျော့နည်းနှင့်အတူ mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းထိန်းညှိခြင်းနှင့်ကင်းအတော်ကြာ preclinical studies.242-251 နာတာရှည်အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံ dopamine ကိုလည်းပြသထားပြီးနှိုးဆွပေး သိသိသာသာ ventral နှင့် dorsal striatum, အရှေ့မှောက်-ဦးနှောက်၏အခြားဒေသများရှိဗဟို noradrenergic လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲပစ်လျက်, ventromedial prefrontal cortex.252,253 လူ့ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများတိုကျရိုကျနှင့် ventral striatum အတွက်လျှော့ D2 receptors နှင့် dopamine ဂီယာနှင့်အတူဤ preclinical ဒေတာ corroborate မှ စူးရှသောရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာဆုတ်ခွာစဉ်ကအရက်သမားနှင့်ကိုကင်းချိုးဖောက်ဒေသများ (3-4 လအထိ) .254-256 ထို့ပြင် ventral striatum နှင့် anterior caudate အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေအတွက်ပိုက်ဆံလက်ခံရရှိကျော် Self-စီမံခန့်ခွဲကင်းရန် preference ကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် ဤပြောင်းလဲမှုများ abusers.257 လူ့ကိုကင်းများမှာ mesolimbic dopamine နဲ့ norepinephrine အပေါ်ချို့တဲ့ယခင် section134,187,258 အတွက်မှတ်ချက်ပြုကြာရှည်နှင့်ထပ်ခါတလဲလဲဖိအားများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆင်တူနှင့် extrahypothalamic CRF, noradrenergic, ဒါမှမဟုတ် glucocorticoid စနစ်များအပေါ်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများမှာအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား corticostriatal တွင်ဤ dopamine-related အပြောင်းအလဲများကို modulate စခွေငျးငှါရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုမြှင့် limbic dopamine လမ်းကြောင်း။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, စူးရှသောပုံမှန်အစည်းအဝေး, နှင့် "ာင်း" သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှတိုးမြှင့်အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical တုံ့ပြန်မှုအတွက်မူးယစ်ဆေးရလဒ်များကိုမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှု။ အဆိုပါ VTA, NAc အတွက် Synaptic ပွောငျးလဲနှင့် dopamine အာရုံခံခြင်းနှင့် CRF နှင့် DA နှင့် Non-DA လမ်းကြောင်းများအပြင် abuse.210,259-262 ၏စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအမူအကျင့်ာင်းအထောက်အကူပြုအပေါ် noradrenergic သက်ရောက်မှုအပေါ်အချိုမှုအပေါ်သက်ရောက်မှုများ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်အားဖြင့် modulated PFC medial အဆိုပါ mesolimbic dopamine ဒေသများတွင် neurotrophic အချက် (BDNF) ဆင်းသက်လာဦးနှောက်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထို့အပြင် use.263,264 ထံမှ abstinence စဉ်အတွင်းရှာကြံမူးယစ်ဆေးအတွက်တိုးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်, အလွဲသုံးစားမှုနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိအပြုအမူာင်း mesolimbic dopamine ဒေသများတွင် Synaptic အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်နေကြတယ်, အထူးသဖြင့် VTA, NAc နှင့် amygdala နှင့်ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေထို့ကြောင့် compulsive မူးယစ်ဆေး seeking.118,265 အထောက်အကူပြု, သိသာဇီဝကမ္မ, neurochemical နှင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် dopaminergic လမ်းကြောင်းအတွက်အမူအကျင့်ကိုပြောင်းလဲအလှည့်အတွက်တဏှာနှင့် compulsive ထိခိုက်နိုင်သောရှိပါတယ် , မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပြုစုလျက်, relapse အန္တရာယ်။ ဤအပြောင်းအလဲများကိုဆက်လက်သို့မဟုတ်အတိုင်းအတာအရာဆက်စပ်အလုပ်လုပ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွင်ဤလမ်းကြောင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှုများပြန်လည်နာလန်ထူသို့မဟုတ်ပုံမှန်ရှိဖို့ဘယ်လိုရှည်လျားလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။
ယားယံခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်မှု, စိတျပိုငျးဆိုငျရာဒုက္ခဆင်းရဲ, အိပ်စက်ခြင်းပြဿနာများ, dysphoria, ရန်လိုအပြုအမူတွေ, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတဏှာ၏လက်တွေ့ရောဂါလက္ခဏာတွေအစောပိုင်းအရက်ထဲကနေ abstinence, ကင်း, opiates, နီကိုတင်းနှင့် marijuana.30,266-269 တစ်ဦးကပျော့ "ကိုအကျိုးသက်ရောက်အနုတ်လက္ခဏာ" နှင့်တဏှာပြည်နယ်အတွင်းမှာဘုံများမှာ အဲဒီရောဂါလက္ခဏာတွေ၏ပြင်းထန်မှုပိုဆိုးကုသမှု outcomes.37,197,250,270-271 မူးယစ်ဆေးတဏှာပိုမိုမှီခိုနှင့် abstinence ပြင်းထန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်နှင့်အတူ, ကုသမှုရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးအတွက် "လို" လျက်ရှိသည် pathways.274 စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ dopamine မြားတှငျပွောငျးလဲနှင့်ဆက်စပ်, postwithdrawal ensues ဒါကြောင့် "အလိုဆန္ဒ" သို့မဟုတ်တစ်ဦး hedonic လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ဆန္ဒမှလာကဲ့သို့သောအခြားစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်စေရောဂါလက္ခဏာတွေကနေသဘောတရားကွဲပြားခြားနားသည်။ သို့သော်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်တကွ, ဝေါဟာရကိုအထူးသဖြင့်စွဲ patients.274-277 ခြင်းဖြင့်ဖော်ထုတ်တဏှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေလျက်များ၏ပိုပြီး compulsive ရှုထောင့်များအားဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဇီဝကမ္မလိုအပ်ကြောင်း, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်လိုချင်သောအရာဝတ္တုထွက်ရှာခိုင်မာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဆက်စပ်ဖြစ် , တဏှာနှင့် compulsive ရှာပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှု, မူးယစ်-related တွေကိုနှင့်မူးယစ်ဆေးအလိုလိုဆက်စပ်၌ထင်ရှားနေသည်နှင့်စွဲလမ်း၏အများအပြားမကြာသေးမီမော်ဒယ်များဒီတဏှာကြီးထွားသို့မဟုတ်လိုသောသောအယူအဆတင်ပြကြ relapse.30,274,278-281 များအတွက်အစွမ်းထက်ခလုတ်ဖွစျလာနိုငျ မူးယစ်ဆေးဝါး၏ယခင်အခန်းတွင်ဆွေးနွေးစိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ dopamine လမ်းကြောင်းအတွက်မော်လီကျူးများနှင့်ဆယ်လူလာအပြောင်းအလဲများကိုများ၏အမူအကျင့်ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်မှာဒီစိတ်ကူးတချို့ထောက်ခံမှုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအကျဉ်းချုံးဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာသည်။
ငါ၏အဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာကျနော်တို့အရက်သမား, ကိုကင်း-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက် naltrexone-ကုသ, opiate-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မူးယစ်ဆေးတဏှာအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-related တွေကိုသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ induction ကျွန်ုပ်တို့၏ကနဦးတွေ့ရှိချက်စွဲထဲမှာညွှန်ပြ method.282 အဖြစ်မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုကိုယ်ပိုင်ပဲ့ထိန်းပုံရိပ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသုံးပြီးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် nonstressful မူးယစ်ဆေး-cue အခြေအနေများနှင့်ကြားနေလျှော့ပေါ့အခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့နေသောကုသမှု-စေ့စပ်, abstinent, စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် တစ်ဦးချင်းစီ, စိတ်ဖိစီးမှုပုံရိပ်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမအမျက်ဒေါသသို့မဟုတ်ဝမ်းနည်းမှုအတွက်တိုးရူးနှမ်းရာအများပြည်သူစကားပြော၏စိတ်ဖိစီးမှု, နှိုင်းယှဉ်ပါကကြောက်ရွံ့ခြင်း, ဝမ်းနည်းမှုနှင့်အမျက်ဒေါသ၏မျိုးစုံစိတ်ခံစားမှုရူးနှမ်း။ အများပြည်သူစကားပြောနှလုံးခုန်နှုန်း, တံထွေး cortisol, မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္စိုးရိမ်စိတ်အတွက် not.283-285 သိသိသာသာတိုးလည်းစိတ်ဖိစီးမှုမှပုံရိပ်ထိတွေ့မှုနှင့် nonstress မူးယစ်ဆေးတွေကိုအတူကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့ကြခဲ့ဘူးနေချိန်မှာအပြင်, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖိအား၏ပုံရိပ်, ကိုကင်းတဏှာအတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးထုတ်လုပ် ကိုကင်း-မှီခို individuals.285 အတွက်ကြားနေလျှော့ပေါ့တွေကိုပိုမကြာသေးမီကကျနော်တို့စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အရက် / မူးယစ်ဆေး-related လှုံ့ဆော်မှုအလားတူတဏှာ, စိုးရိမ်စိတ်, အနုတ်လက္ခဏာစိတ်ခံစားမှုများနှင့် abstinent အရက်သမားနှင့် naltrexone-ကုသ, opiate အတွက်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းပြသကြမှနှိုင်းယှဉ်ပါက အခြားတစ်ဖက်တွင် individuals.286,287 -addicted စိတ်ဖိစီးမှုမှ cortisol ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်မကြာသေးမီက abstinent အရက်သမားနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သူတို့၏ nonaddicted counterparts.288-290 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပြောင်းလဲ Basal HPA တုံ့ပြန်မှုနှင့်နှိမ်နင်း HPA တုံ့ပြန်မှုကိုပြသ
မကြာသေးမီက abstinent ကင်း-စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဇီဝစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုထက်ပိုသောပြည့်စုံသောအကဲဖြတ်တှငျကြှနျုပျတို့ကြားနေအားမစိုက်ရတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပါကစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးတွေကိုမှအကျဉ်းထိတွေ့သည့် HPA ACTH အတွက်တိုးနှင့်အတူဝင်ရိုး (cortisol နှင့် prolactin အဆင့်ဆင့် activated ကြောင်းအစီရင်ခံ ) အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ် plasma norepinephrine နှင့် epinephrine levels.282 ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် sympthoadrenomedullary စနစ်များ, ထို့အပွငျကြှနျုပျတို့အ 1-မိပုံရိပ်ထိတွေ့ပြီးနောက်5ဇထက် ပို. ပင်ပြန်လည်နာလန်ထူ၏နည်းနည်းသက်သေအထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့သို့မဟုတ် ACTH, NE နှငျ့ EPI အဆင့်ဆင့်အတွက်အခြေခံမှပြန်လာ ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်များကိုတိုက်ရိုက်ကြားနေပုံရိပ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးချင်းစီချိန်ညှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရစိတ်ခံစားမှုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး / အရက်သေစာ cue-ဆက်စပ်ပုံရိပ်သုံးပြီးကျန်းမာတဲ့လူမှုရေးသောက်တစ်ပထဝီလိုက်ဖက်အုပ်စု abstinent ကင်း-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီကိုနှိုင်းယှဉ်တိုးချဲ့ခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်ငါတို့သည်လည်းလိုက်ဖက်လူမှုရေးသောက်ရန် 291-ရက်သတ္တပတ် abstinent အရက်သမားနှိုင်းယှဉ်ကင်းလူနာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်ဇီဝကမ္မ arousal တစ်ခုတိုးမြှင် sensitivity ကိုပြစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-cue ထိတွေ့မှုနှစ်ဦးစလုံးမှမူးယစ်ဆေးတဏှာ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းအလားတူပင် controls.4 နှိုင်းယှဉ်ကြောင်းညွှန်ပြ။4ရက်သတ္တပတ် abstinence မှာပြန်လည်အရက်သမားထိန်းချုပ်မှုသောက်နှိုင်းယှဉ် Basal နှလုံးခုန်နှုန်းပိုမိုအဆင့်ဆင့်နှင့်တံထွေး cortisol ပမာဏပြသခဲ့သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အရက်-cue ထိတွေ့မှုအပျေါမှာသူတို့ controls.239 စိတ်ဝင်စားစရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, အရက်တဏှာဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ သာ. ကြီးမြတ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဒုက္ခဆင်းရဲပြပြီး, သွေးဖိအားတုံ့ပြန်မှုကားနှိမျနငျးနှလုံးခုန်နှုန်းနဲ့ Cortisol တုံ့ပြန်မှု, နှစ်ဦးစလုံးကိုကင်းလူနာများနှင့်အရက်သမားစဉ်အတွင်းတိုးမြှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုပြသ မူးယစ်ဆေး-cue ထိတွေ့မှု, လူမှုရေးသောက်အရက်-cue ထိတွေ့မှုနှင့်အတူနိမ့်အနုတ်လက္ခဏာများ၏အဆင့်ဆင့်ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်သတင်းပို့နေစဉ်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုမြင့်မားတဲ့မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏တိုက်ရိုက်သက်သေအထောက်အထားပေးနှင့်လူမှုရေးသောက် (ပုံ။2ကိုကြည့်ပါ) နဲ့နှိုင်းယှဉ်စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကိုနှစ်ဦးစလုံးမှ hedonic တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကအစဇီဝကမ္မစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုမြားတှငျပွောငျးလဲစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် cue-သွေးဆောင်တဏှာနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲပြည်နယ်များ၏မြင့်မားနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်ကဖော်ပြသည်။ အဆိုပါပွောငျးလဲ၏သဘောသဘာဝ, တိုးမြှင့်စိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲများကမှတ်သားတဏှာကြီးထွား, ပြောင်းလဲ Basal တုံ့ပြန်မှုများနှင့်လူမှုရေးသောက်နှိုင်းယှဉ် abstinent စွဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေသို့မဟုတ်နှိပ်ကွပ်နေကြသည်။
ပုံ2(အခန်း)
စိတ်ဖိစီးမှု၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ကြားနေမှုပုံရိပ်အခြေအနေများနှင့်ထိတွေ့နေစဉ်အတွင်းအထွတ်အထိပ်တဏှာနှင့်စိုးရိမ်မှုများအဆင့်အတန်းနှင့်စံသတ်မှတ်ချက်များအမှားများ။ (က) သောက်သုံးသူများနှင့်ကိုကင်းလူနာများအကြားလူမှုရေးသောက်သူများ (P <0.0001) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အထွတ်အထိပ်တမ်းတမှုသည်သိသိသာသာမြင့်မားသည်။ (ခ) လူမှုရေးသောက်သူများ (P <0.001) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် abstinent အရက်သမားနှင့်ကိုကင်းလူနာအတွက်အမြင့်ဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။ (အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Fox et al.291 နှင့် Sinha et al ၂၉၉ တွင်ဖော်ပြထားသည်)
များစွာသောလေ့လာမှုများသည်စွဲစွဲလမ်းသူများ၏တွန်းအားနှင့်ဆက်စပ်သည့် ဦး နှောက်ဒေသများကိုလည်းလေ့လာခဲ့သည်။ တဏှာစွဲစွဲလမ်းမှုကိုတိုးပွားစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့မှုသည် amygdala နှင့် frontal cortex ၏ဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုတိုးပွားစေသည်။ opiates သည် prefrontal cortex, amygdala, hippocampus, insula နှင့် VTA တို့၏ဒေသများကိုလည်းလှုံ့ဆော်သည် (Ref ။ 292 ကိုကြည့်ပါ) ။ စိတ်ဖိစီးမှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးတွန်းအားကိုတိုးပွားစေသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ကြားခံရုပ်ပုံများကိုလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းအလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) လေ့လာမှုတွင်လေ့လာခဲ့သည်။ ကျန်းမာသောထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ကိုကိုးမှီခိုနေသူတစ် ဦး ချင်းတို့သည်စိတ်ဖိစီးမှုများစဉ်အတွင်းအလားတူစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်သွေးခုန်နှုန်းပြောင်းလဲမှုများကိုပြသခဲ့ကြသော်လည်း၊ paralimbic ဒေသများရှိစိတ်ကြွစိတ်ဖိစီးမှုများကိုစိတ်ဖိစီးမှုများစဉ်ကစိတ်ဖိစီးမှုကာလအတွင်းပိုမိုကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုများရှိခဲ့သည်။ လူနာထိုကဲ့သို့သော activation.294 တစ်ဒီကဗျာမရှိခြင်းပြသခဲ့သည်ဆနျ့ကငျြ, ကိုကင်းလူနာသိသိသာသာစိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်ကိုကင်းတပ်မက်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောစိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်း caudate နှင့် dorsal striatum ဒေသတွင်း၌လှုပ်ရှားမှုတိုးလာခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက PET လေ့လာမှုများက dorsal striatum နှင့်မူးယစ်ဆေး cue- သွေးဆောင်ကင်း craving craving craving.299,300 အကြားသိသာထင်ရှားသောအပြုသဘောဆက်နွယ်မှုကိုပြသ.301,302ဒီတွေ့ရှိချက်အရက်သောက်လူနာနှင့်အတူပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှင့်အရက်သေစာနှင့်ဆက်စပ်သော၏တင်ပြချက်တုံ့ပြန်အရက်တပ်မက်ခြင်းအကြားတိုးမြှင့်ဆက်စပ်မှုကိုပြသအရက်ဆိုင်လူနာနှင့်အတူကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ stimuli.2 အရက်သမားများနှင့်ကိုကင်းလူနာများနှင့်အတူ PET ပုံရိပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သုတေသနသည် VS တွင်ပါဝင်သော dopamine D124,303,304 receptor နှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုတို့အကြားသိသာထင်ရှားသောဆက်စပ်မှုနှင့်ကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်မှုအတွက်လှုံ့ဆော်မှုပြသခြင်းဖြစ်သည် ။305 အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်းအပါအ ၀ င်အလုပ်အမှုဆောင်တာ ၀ န်များသည်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစွဲလမ်းသူများအားအလုပ်အမှုဆောင်လိုအပ်ချက်နှင့် hypofrontal တုန့်ပြန်မှုများကိုပြသသည် ။312-XNUMX အတူတကွတွေ့ရှိချက်များအရစိတ်ဖိစီးမှုများပြားလာခြင်း၊ add အတွက်ပြည်နယ်များရှာကြံ icted တစ် ဦး ချင်းစီသည် striatum တွင်ပိုမိုသောလှုပ်ရှားမှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော်လည်း cingulate နှင့် prefrontal cortex နှင့်စိတ်ကြွစိတ်ဓာတ်များကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်ပါ ၀ င်သောသက်ဆိုင်ရာဒေသများတွင်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားသည်။
စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ရှာမူးယစ်ဆေးနှင့် Relapse ၏ Reinstatement
စွဲလမ်း၏ကုသမှုထဲမှာအများအပြားထိရောက်မှုအမူအကျင့်များနှင့် pharmacological ကုထုံးတည်ရှိနေစဉ်, ကကောင်းစွာစွဲအတွက် relapse နှုန်းထားများစိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများမှ high.30,313,314 Exposure ကျန်ကြွင်းသောလူသိများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတစ်ဦးချင်းစီတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူပြန်လည်နှင့် relapse တိုးမြှင့် စွဲ individuals.274,315-317 ထိုသို့သောဒေတာအတွက်လွယ်ကူစွာထိခိုက်စွဲကုသမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပစ်မှတ်အဖြစ်နာတာရှည် relapse လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဖို့တိကျတဲ့အာရုံစိုက်မှုရှိဘို့လိုအပ်ကြောင်း underscore ။
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များတွင် preclinical လေ့လာမှုသိသိသာသာအရေအတွက်ကိုကြောင့်ဦးနှောက် CRF, noradrenergic ပြသပြီ, glutamatergic လမ်းကြောင်း, နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ဆက်စပ် Neuroadaptations overactive ဦးနှောက် CRF နှင့် glutamatergic လမ်းကြောင်းများပါဝင်သည်မူးယစ်ဆေး seeking.86,316-320 ၏ reinstatement မှပြောင်းလဲကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုံ့ပြန်မှုကိုအထောက်အကူပြု နှင့် underactive dopamine နဲ့ဂါဘမြို့သားစနစ်များ, ဤအပြောင်းအလဲများကိုထို့အပြင် addiction.118,196,197,274,313,321 ၏နာတာရှည်သဘောသဘာဝနှင့်ဆက်စပ်မြင့်တဏှာပြည်နယ်နှင့် relapse လွယ်ကူစွာထိခိုက်အတူလိုက်ပါစေခြင်းငှါ, မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. preclinical လေ့လာမှုများ CRF ရန်ဖော်ထုတ်ကြ alpha- ပိုပြီးမကြာသေးမီက 2-adrenergic agonists လျက်, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်စွဲဓာတ်ခွဲခန်းတိရိစ္ဆာန်များ (see316,317,322-324) တွင်ရှာကြံလျှော့ချအတွက်အရေးကြီးသောအဖြစ် glutamatergic အေးဂျင့်။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုယခင်အပိုင်းအတွက်ပြန်လည်သုံးသပ်လူ့တွေ့ရှိချက်စိတ်ဖိစီးမှုမြားတှငျပွောငျးလဲနှင့် dopaminergic လမ်းကြောင်းမြင့်မားသောဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့်တဏှာပြည်နယ်နှင့်တုံးဇီဝကမ္မနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု, တဏှာနှင့်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်စည်းမျဉ်းအတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်ကြောင်းအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှုအတူလိုက်ပါကြောင်းညွှန်ပြနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။
လူ့သုတေသနကိုလည်း relapse ရလဒ်များ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များမှာသောကဖိစီးမှုနှင့်တဏှာပြည်နယ်များ၏အမှတ်အသားများကိုသိရှိနိုင်ဖို့စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝတိုးမြှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-တဏှာပြည်နယ် relapse ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ရှိမရှိနားလည်ရန်, ငါတို့ relapse ရလဒ်များအကဲဖြတ်ရန် 90 နေ့ရက်ကာလအဘို့အတွင်းလူနာကုသမှုအနေဖြင့်ဥတုပြီးနောက်ယခင်အပိုင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေအတွက်အတွင်းလူနာကုသမှု-စေ့စပ် cocaine- နှင့်အရက်-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီနောက်တော်သို့လိုက် ။ အဆိုပါကင်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, ကြှနျုပျတို့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာသိသိသာသာကင်း relapse ဖို့အချိန်ခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် ACTH နဲ့ Cortisol တုံ့ပြန်မှုပြန်သွားကြသည်ရန်အချိန်နှင့်ဆက်စပ်မနေစဉ်တွင်ဤတုံ့ပြန်မှုမူးယစ်ဆေး cue-သွေးဆောင်တဏှာကဒီလေ့လာမှုမှာ relapse ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်မဟုတ်ခဲ့, မြင့်ရှိခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆက်တွဲ up.325 ကာလအတွင်းစားသုံးကင်း၏ပမာဏ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ခဲ့ကြသည် စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး cue-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးတဏှာအကြားနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး cue-သွေးဆောင် HPA တုံ့ပြန်မှုအတွက်ဆက်စပ်မှု။ ဤရွေ့ကားဒေတာမှာအနည်းဆုံးကင်းမှီခို၏ဖြစ်ရပ်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး cue-သွေးဆောင်ဒုက္ခဆင်းရဲပြည်နယ်များ relapse အားနည်းချက်နဲ့ဆက်စပ်ကြောင်းအလားတူ compulsive မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံပြည်နယ်ထုတ်လုပ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အရက်သမားမှာတော့အနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အရက်သေစာတဏှာနှင့်တုံးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် cue-သွေးဆောင် cortisol တုံ့ပြန်မှုဖိအားတစ်ခုစီးရီးထိတွေ့နေသောအရက် relapse outcomes.236,326-329 နီကိုတင်း-ဆုံးရှုံးဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ, cortisol တုံး ACTH ပြ နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုမှသွေးဖိအားတုံ့ပြန်မှုပေမယ်ကင်းအုပ်စုအဖြစ်ကမူးယစ်တဏှာပြည်နယ်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်မှတ်သားပုံ, အရက်နှင့်ဆေးလိပ်နမူနာဘို့, အရှင်နီကိုတင်းရုပ်သိမ်းရေးနှင့်တဏှာရမှတ်တိုးမြှင့်, ဤတုံ့ပြန်မှုနီကိုတင်း relapse outcomes.289 ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ခဲ့ကြသည် ဆင်းရဲသောသူသည်စိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်းတုံ့ပြန်မှု (ပြောင်းလဲ glucocorticoid တုံ့ပြန်ချက်သို့မဟုတ်တိုးလာ noradrenergic arousal) စွဲ relapse တစ်ခုတိုးမြှင်လွယ်ကူစွာထိခိုက်အတွက်ရလဒ်တွေကိုနှင့်အတူမူးယစ် (တဏှာ) အတွက်ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့် compulsive လှုံ့ဆျောမှု။
အခြေခံသိပ္ပံနှင့်လူ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေတွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့ရလဒ်ကိုလေ့လာမှုများမူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့် relapse လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement ဖြေရှင်းရန်အများအပြား pharmacological ကုသမှုပစ်မှတ်ကိုဖေါ်ထုတ်။ အခြေခံပညာသိပ္ပံဒေတာ CRF ရန်, alpha-2 adrenergic agonists အကြံပြုနှင့် glutamatergic အေးဂျင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related relapse addressing အတွက်ကတိပေးနိုင်ပါတယ်။ လူ့ဓာတ်ခွဲခန်းလေ့လာမှုများစိတ်ဖိစီးမှု-related relapse လွယ်ကူစွာထိခိုက်၏အလယ်အလတ်အမှတ်အသားများနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောအကဲဖြတ်ရန်ဤအေးဂျင့်ပြလိမ့်မည်ဟုလိုအပ်နေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုများ stress- နှင့် cue-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးတဏှာ, တဏှာ-related စိုးရိမ်စိတ်, HPA အစီအမံများနှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းသို့မဟုတ်နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအဖြစ်ပဏာမဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လက်တွေ့ရလဒ်များလေ့လာမှုမှာဥပမာသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဦးနှောက် regions.297 အတွက်တုံ့ပြန်မှု, ပစ်မှတ်ထားမယ်လို့ ငါတို့သည်လည်း naltrexone-ကုသအတွက် opiate relapse ရလဒ်များတိုးတက်အောင်နေချိန်မှာသိသိသာသာ opiate-မှီခို individuals.2 အလားတူပဲ, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် opiate တဏှာနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အမျက်ဒေါသ ratings လျော့နည်းသွား, လျော့ကြောင်းအမူအကျင့်မဟာဗျူဟာများကြောင့် lofexidine တစ်ခု alpha-330 adrenergic agonist ပြခဲ့ကြ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-related မူးယစ်ဆေးတဏှာနဲ့ high-စိန်ခေါ်မှုအခင်းအကျင်းအတွက်တုံ့ပြန်သပ္ပါယ်မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့် relapse အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများလျော့ကျလာအတွက်အကျိုးရှိလိမ့် potentiate မှသကဲ့သို့စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုပုံမှန်။ ဥပမာအားဖြင့်, သတိသမ္အခြေစိုက်စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရေး (MBSR) အဓိကစိတ်ကျရောဂါမှ relapse လျော့ကျလာအတွက်ထိရောက်မှုဖြစ်ပါသည်, ဤနည်းဗျူဟာများအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင် addiction.274 အတွက် relapse အန္တရာယ်ဖြေရှင်းရန်အကျိုးဖြစ်နိုင်
ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအကြောင်း, စွဲလမ်းနှင့် relapse ၏အန္တရာယ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနှစ်ခုစလုံးအန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်, အလွန်အမင်းစိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများနှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုစွဲအားနည်းချက်တိုးမြှင့်ကြောင်း, preclinical လက်တွေ့နှင့်လူဦးရေလေ့လာမှုများကနေစုဆောင်းသက်သေအထောက်အထားများအပေါ်အာရုံစိုက်။ စွဲလမ်းအန္တရာယ်တိုးမြှင့်ကြောင်းဖိအားအမျိုးအစားများဇယား 1 အတွက်ဖော်ထုတ်နေကြပါတယ်။ အဆိုပါဖိအားမထိန်းချုပ်နှင့်ကလေးများနှင့်လူကြီးများနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ခန့်မှန်းရခက်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရပ်များဒုက္ခခံစားခဲ့ရအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ themes များဆုံးရှုံးခြင်း, အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ကျူးကျော်ထံမှဆင်းရဲသားကိုထောက်ခံကြောင်း, လူ့ပဋိပက္ခ, အထီးကျန်နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာအထိ။ စုဆောင်းဒုက္ခနှင့်စွဲလမ်းအန္တရာယ်-The ဖိအားတစ်ဦးချင်းထိတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ပိုမိုအရေအတွက်က, စွဲဖွံ့ဖြိုးဆဲမှုအန္တရာယ်ကိုပိုမိုမြင့်မားအကြားထိုး-မှီခိုဆက်ဆံရေးသက်သေအထောက်အထားလည်းရှိပါတယ်။ အလုပ်-related ဖိအားအားနည်းထောက်ခံမှုအများရှိသော်လည်း, (ဆငျးရဲသားအလုပ်အမှုဆောင် function ကိုမှဖြစ်နိုင်သည်အလားတူ) ဤသို့သောသဘောကိုအပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှုများနှင့်ဆင်းရဲသားကို Self-ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီ-Level variable တွေကိုလည်းစွဲအန္တရာယ်မှထူးခြားအထောက်အကူပြုဖို့ပေါ်လာပါသည်။ အစောပိုင်းအသက်တာ၌ထိုကဲ့သို့သောဖိအား exposure နှင့်စုဆောင်းခြင်းစိတ်ဖိစီးမှု (နာတာရှည်) ၏ neuroendocrine မှု, ဇီဝကမ္မ, အမူအကျင့်များနှင့်ရေရှည်တည်တံ့တာရှည်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ဆိုးရွားစွာဦးနှောက်သင်ယူမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စနစ်များ, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဖိစီး-ဆက်စပ်သပ္ပါယ်အပြုအမူတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်လေ့ကြောင်းပုဂ္ဂလဒိဋ္အပြောင်းအလဲများ ။ တိုက်ရိုက်စိတ်ဖိစီးမှု-related neurobiological အပြောင်းအလဲများကိုအမှာစကားနှင့်အမူအကျင့်ရလဒ်များနှင့်အတူ၎င်းတို့၏အသင်းအဖွဲ့မိန်းမောလိုအပ်ကြောင်းသုတေသန။ mesolimbic dopamine လှုပ်ရှားမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့်အတူ၎င်း၏အသင်းအဖွဲ့မြားတှငျပွောငျးလဲဖို့စိတ်ဖိစီးမှု၏အလှူငွေရှင်းလင်းဖို့သက်သေအထောက်အထားလည်းလိုအပ်ပါသည်။ ပုံ 1 သုတေသနအတွက်ထောက်ခံခဲ့ကြကြောင်းအသင်းအဖွဲ့များ၏သိထားမော်ဒယ်အဖြစ်ကျန်ရှိကွာဟချက်တွေ့ရမယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့် dopamine ဂီယာအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အလွဲသုံးစားမှု၏သက်ရောက်မှုကိုညွှန်းသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမှတဏှာနှင့် relapse နှင့်ဆက်စပ်ပြောင်းလဲစိတ်ခံစားမှုနဲ့စိတ်ခွန်အားနိုးတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့အတူတင်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ လှုံ့ဆော်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် dopaminergic လမ်းကြောင်းအတွက်အပြောင်းအလဲမိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ရှင်သန်မှုအတွက်လိုအပ်သောသပ္ပါယ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုရလဒ်များကိုနေစဉ်, ဒီလိုအပြောင်းအလဲတွေမူးယစ်ဆေးရှာသို့မဟုတ်တဏှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းအပြုအမူတွေကိုမြှင့်တင်ရန်ရှိမရှိအဘို့သက်သေအထောက်အထားချို့တဲ့နေပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, licit နှင့်တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုမှကြိုတင်ထိတွေ့စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအကြားအသင်းအဖွဲ့ကိုအထူးပြုရှိမရှိအပေါ်လေ့လာမှုများရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ ဆုလာဘ်အတွက်တိကျတဲ့ neuroadaptations နှင့်ဆက်စပ်နေသောဒေသများရှိပါတယ်နေစဉ်, ကမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုတိုးပွားလာအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်သောဆုံးရှုံးမှုအဖြစ်စွဲလမ်းဖြစ်စဉ်များကိုထောက်ခံ, တဏှာ၏ဇွဲနှင့်မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမြင့်တက်ဖြစ်ကြောင်း, ဤအပြောင်းအလဲများထားတဲ့ဆနျးစစျဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုလည်းအလွန်အမင်းစွဲလမ်းနှင့်အတူ comorbid ဖြစ်ကြောင်းစိတ်ဓါတ်များနှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်များ၏အန္တရာယ်တိုးပွါးကြောင့်စိတ်ဓါတ်များနှင့်စိုးရိမ်စိတ်ပုံမမှန်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်းအန္တရာယ်အဘို့အအန္တာရာယ်မှအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းတိကျတဲ့စိတ်ဖိစီးမှု-related အချက်များရှိပါသည်ရှိမရှိဆန်းစစ်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ အဲဒီနာမကျန်းမှုတစျခုအစုများအတွက်အကာအကွယ်ဖြစ်ကြောင်းပေမယ့်အခြားအများအတွက်အားနည်းချက်များသောခံနိုင်ရည်အချက်များဘာတွေလုပ်နေလဲဖြစ်ပါသည်။ မျိုးဗီဇ-ပတ်ဝန်းကျင် interaction က၏တူးဖော်ရေးထိုကဲ့သို့သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုခြင်းအတွက်အထူးအထောက်အကူဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးရှာ, မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့် relapse လွယ်ကူစွာထိခိုက်ဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အပေါ်မကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ဦးကသုံးသပ်မှုကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားပါသည်။ လက်တွေ့သက်ရောက်မှုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် relapse အန္တရာယ်ကြားက link ကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းဝတ္ထု pharmacological ကုထုံး၏စိတ်ဖိစီးမှု-related relapse နှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများအတွက်အထူးသဖြင့်အန္တရာယ်မှာနေသောသူတို့ကိုဖော်ထုတ်အတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်အသစ်အကဲဖြတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အမှတ်အသားများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများပါဝင်သည်။ ပုံ2မှာပြထားတဲ့အတိုင်းစွဲတစ်ဦးချင်းစီတဏှာနှင့် stress- နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အခြေအနေများတွင် သာ. ကြီးမြတ်စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့မြှင့်တင်ရန် sensitivity ကိုပြသပေမယ့်ထိုကဲ့သို့ပြောင်းလဲတုံ့ပြန်မှုကြောင့်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသို့မဟုတ်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုမှအသွင်ကူးပြောင်းမှုကိုကိုယ်စားပြုခြင်းရှိမရှိထပ်မံဆန်းစစ်ခံရဖို့လိုအပ်ချက်ကဖော်ပြသည်။ နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသပ္ပါယ်အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုအလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြောင်းလဲပေးသောအားဖြင့်ယန္တယားအပေါ်သုတေသနလိုအပ်ပါသည်။ ထိရောက်မှုအပြုအမူကုသတုံ့ပြန်မှုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတိုးတက်အောင်အာရုံစိုက်ပါ။ သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှုထိတွေ့မှုနှင့်နာတာရှည်ဒုက္ခဆင်းရဲစိတ်ဖိစီးမှု adapter နဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းယန္တရားများလျော့နှင့်ဤအရပ်မှဖြေရှင်းတိုးမြှင့်အာရုံစိုက်ကြောင်းကုသမှုစိတ်ဖိစီးမှု-related အန္တရာယ်အချက်များနှင့်အတူသူတို့အဘို့သင့်လျော်မည်မဟုတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုများအခြေအနေတွင်ရှိ Self-ထိန်းချုပ်မှုပစ်မှတ်ထားကြောင်းသစ်ကိုကြားဝင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ပါသည်။ ဤမေးခွန်းများကိုအပေါ်စနစ်တကျသုတေသနပြုစိတ်ဖိစီးမှု relapse နှင့်ဆက်စပ်သည်မည်သို့ကြီးမြတ်သောနားလည်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောသုတေသနဆေးဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ဧရိယာနှင့်အထူးစွဲများတွင်ဆက်လက်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့် relapse အပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများပစ်မှတ်ထားကြောင်းအမူအကျင့်ကုသမှုဖွံ့ဖြိုးဆဲရော, relapse လျှော့ချရန်အသစ်သောကုသမှုပစ်မှတ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်သိသာထင်ရှားသောဖြစ်နိုင်သည်။
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ပြင်ဆင်မှုကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institutes, P50-DA165556, R01-AA13892, R01-DA18219 နှင့် U01-RR24925 ထံမှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်။
1 ။ လာဇရုကို RS ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် Emotion: တစ်ဦးကနယူး Synthesis ။ Springer ထုတ်ဝေရေးကုမ္ပဏီ; နယူးယောက်: 1999 ။
2 ။ Cohen ကိုက S, Kessler RC, ဂေါ်ဒွန် LU ။ စိတ်ရောဂါနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်း၏လေ့လာမှုများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတိုင်းတာခြင်းများအတွက်မဟာဗျူဟာများ။ ခုနှစ်တွင်: Cohen ကိုက S, Kessler RC, ဂေါ်ဒွန် LU, အယ်ဒီတာများ။ တိုင်းတာခြင်းစိတ်ဖိစီးမှု: ကနျြးမာရေးနှငျ့လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်များကများအတွက်လမ်းညွှန်။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1995 ။ စစ။ 3-26 ။
3 ။ စိတ်ဖိစီးမှုမှ sensitivity ကိုများနှင့်ယဉ်ပါး၏ Levine အက်စ် Developmental ပြဌာန်းခွင့်။ Psychoneuroendocrinology ။ 2005; 30: 939-946 ။ [PubMed]
4 ။ Charmandari အီး, Tsigos ကို C, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု Chrousos G. အဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ Annu ။ ဗျာ Physiol ။ 2005; 67: 259-284 ။ [PubMed]
5 ။ McEwen BS ။ စိတ်ဖိစီးမှုပြုပြီ၏အကာအကွယ်နှင့်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများ: စိတ်ဖိစီးမှုဖို့တုန့်ပြန်၏ကောင်းမကောင်းနှစ်ဖက်။ ဇီဝြဖစ်။ 2002; 51: 2-4 ။ [PubMed]
6 ။ McEwen BS ။ စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်လိုက်လျောညီထွေ၏ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့် neurobiology: ဦးနှောက်၏ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍ။ Physiol ။ ဗျာ 2007; 87: 873-904 ။ [PubMed]
7 ။ Selye အိပ်ချ်ဘဝ၏စိတ်ဖိစီးမှု။ McGraw-Hill က; နယူးယောက်: 1976 ။
8 ။ Paulus အမတ်။ Psychiatry-ပြောင်းလဲ homeostatic အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအလုပ်မဖြစ်? သိပ္ပံ။ 2007; 318: 602-606 ။ [PubMed]
9 ။ ဘဝစိတ်ဖိစီးမှု Frankenhauser အမ် Psychobiological ရှုထောင့်။ Levine က S, Ursin H ကို, အယ်ဒီတာများ in: ။ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ကျန်းမာရေး။ Plenum စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1980 ။ စစ။ 203-223 ။
10. Lovallo WR ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကျန်းမာရေး: ဇီဝဗေဒနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်။ Sage ထုတ်ဝေမှု, Inc မှ။ ; ထောင်ပေါင်းများစွာသပိတ်, CA: 1997 ။
11 ။ Meaney MJ, ဘရိတ် W က, mesolimbic dopamine စနစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ Gratton အေပတ်ဝန်းကျင်စည်းမျဉ်း: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှအားနည်းချက်များအတွက်တစ်ဦးက neurobiological ယန္တရား? Psychoneuroendocrinology ။ 2002; 27: 127-138 ။ [PubMed]
12 ။ McEwen BS ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် hippocampal plasticity ။ Annu ။ ဗျာ Neuro-သိပ္ပံ။ 1999; 22: 105-122 ။
13 ။ အကျိုးသက်ရောက်စေ neuroscience တစ် functionalist အမြင်: Brian အတွက်ပြောင်းလဲ corticotropin-releasing အချက် activation ၏ Heinrich အက်စ်အပြုအမူအကျိုးဆက်များ။ ခုနှစ်တွင်: Steckler T က, Kalin နယူးဟမ်းရှား, Reul JMHM, အယ်ဒီတာများ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဦးနှောက်၏လက်စွဲစာအုပ်။ အပိုင်း 1: စိတ်ဖိစီးမှု၏ Neurobiology ။ vol ။ 15 ။ Elsevier; အမ်စတာဒမ်: 2005 ။ စစ။ 155-177 ။
14 ။ Berridge CW ။ arousal ၏ Noradrenergic မော်ဂျူ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 2007; 58 (1): 1-17 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
15 ။ et al ဖန် KL ။ အနုတ်လက္ခဏာများ၏ဆန္ဒအလျောက်ဖိနှိပ်မှုများအတွက်အာရုံကြောအလွှာဟာထိခိုက်စေ: တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 57: 210-219 ။ [PubMed]
16 ။ ရောဘတ်တစ်ဦးက, Robbins T က, Weiskrantz အယ်လ်အဆိုပါ Prefrontal Cortex: အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့်သိမှု Functions များ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; အောက်စဖို့, ဗြိတိန်: 1998 ။
17 ။ Arnsten AFT ။ frazzled ခံ၏ဇီဝဗေဒ။ သိပ္ပံ။ 1998; 280: 1711-1712 ။ [PubMed]
18 ။ Willpower မှကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်များ မှစ. Mischel ဒဗလျူ။ Guilford စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1996 ။
19 ။ Barkley RA ။ အမူအကျင့်တားစီး, စဉ်ဆက်မပြတ်အာရုံစိုက်မှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို: ADHD တစ်စညျးလုံးသီအိုရီတည်ဆောက်ခြင်း။ Psychol ။ နွားလား။ 1997; 121: 65-94 ။ [PubMed]
20 ။ Tice: D, Bratslavsky အီး, Baumeister R. စိတ်ခံစားမှုဒုက္ခဆင်းရဲစည်းမျဉ်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ထက် ကျော်လွန်. ကြာ: သင်မကောင်းတဲ့ခံစားရပါကပြုပါ! ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 2001; 80: 53-67 ။ [PubMed]
21 ။ et al Westergaard GC ။ အခမဲ့-အထိအမျိုးသမီးမျောက်ဝံများအတွက်ကျူးကျော်ခြင်းနှင့် Impulse ၏ဇီဝကမ္မ Correlate ။ Neuropsychopharmacology ။ 2003; 28: 1045-1055 ။ [PubMed]
22 ။ et al Hayaki J ကို။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအကြားဒုက္ခ: Impulse မှဆက်ဆံရေးမျိုး။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2005; 78: 65-71 ။ [PubMed]
23 ။ ဂရိ B, Carly အမ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့် NPY Y2 receptors ချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာ Impulse တိုးလာ: anxiolytic ကဲ့သို့ phenotype စပ်လျဉ်း။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2006; 169: 325-334 ။ [PubMed]
24 ။ et al Fishbein DH ။ မြို့ပြအထီးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုဆက်ဆံရေးအကျိုးဆောင်။ prev ။ သိပ္ပံ။ 2006; 7: 113-126 ။ [PubMed]
25 ။ et al Verdejo-Garcia ကတစ်ဦး။ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှု-မောင်းနှင် Impulse ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုပြဿနာများခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2007; 91: 213-219 ။ [PubMed]
26 ။ Anestis MD, Selby EA ၏, ဆက်ပေးသူ TE ။ maladaptive အပြုအမူတွေအတွက်အရေးတကြီး၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ပြုမူနေ။ res ။ Ther ။ 2007; 45: 3018-3029 ။ [PubMed]
27 ။ Hatzinger M က, et al ။ Hypothalamic-pituitary-adrenocortical သူငယ်တန်းကလေးတွေအတွက် (HPA) လှုပ်ရှားမှု: အပြုအမူ / စိတ်ပိုင်းအခက်အခဲများနှင့်အတူကျား, မများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များ၏အရေးပါမှု။ ဂျေ Psychiatric ။ res ။ 2007; 41: 861-870 ။ [PubMed]
28 ။ Arnsten AFT, Goldman-Rakic ​​ဆာ။ တစ်ဦး hyperdopaminergic ယန္တရားအဘို့သက်သေသာဓက: ဆူညံသံစိတ်ဖိစီးမှုမျောက်တွေကို prefrontal cortical သိမြင် function ကိုချို့ယွင်း။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 55: 362-369 ။ [PubMed]
29 ။ Li က CS, Sinha R. Inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုစည်းမျဉ်း: စိတ်ပညာလှုံ့ဆော်စွဲထဲမှာတိုကျရိုကျ-limbic ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် Neuroimaging သက်သေအထောက်အထား။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2008; 32: 581-597 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30 ။ Sinha R. ဘယ်လိုစိတ်ဖိစီးမှုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် relapse ၏အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ပါသလဲ? Psychopharmacology (Berl ။ ) 2001; 158: 343-359 ။ [PubMed]
31. Tomkins အက်စ်အက်စ်။ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအပြုအမူ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမော်ဒယ်။ နံနက်။ J. ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်နိုင်ငံ၏ကျန်းမာရေး။ 1966; 56: 17-20 ။
32 ။ Leventhal H ကို, Cleary PD ။ အဆိုပါဆေးလိပ်သောက်ပြဿနာ: အပြုအမူအန္တရာယ်ပြုပြင်မွမ်းမံအတွက်သုတေသနနှင့်သီအိုရီ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု။ Psychol ။ နွားလား။ 1980; 88: 370-405 ။ [PubMed]
33 ။ စယ်ဂျာအရက်အသုံးပြုမှုအတွက်စိတ်ခံစားမှု၏ Mehrabian အေအာမခံအခန်းကဏ္ဍ။ ဂျေလုံး။ အရက်။ 1975; 36: 1508-1536 ။ [PubMed]
34 ။ Marlatt GA, ဂေါ်ဒွန် JR ။ Relapse ကာကွယ်တားဆီးရေး: စှဲအပြုအမူများ၏ကုသမှုအတွက်ကို Maintenance မဟာဗျူဟာ။ Guilford စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 1985 ။
35 ။ သေတမ်းစာ T က, Shiffman အက်စ်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု: တစ်ဦးကအယူအဆရေးရာမူဘောင်။ Shiffman S က, သေတမ်းစာ T က, အယ်ဒီတာများ in: ။ အသုံးပြုမှုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ပစ္စည်း။ ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; Orlando တွင်, FL: 1985 ။ စစ။ 3-24 ။
36 ။ Khantzian EJ ။ စွဲလမ်းပုံမမှန်ခြင်း၏ Self-ဆေးဝါးအယူအဆ: ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းမှီခိုအာရုံစိုက်ပါ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1985; 142: 1259-1264 ။ [PubMed]
37 ။ Baker တီဘီ, et al ။ စွဲလှုံ့ဆျောမှု reformulated: အနုတ်လက္ခဏာအားဖြည့်များ၏တစ်ဦးထိခိုက်စေအပြောင်းအလဲနဲ့မော်ဒယ်။ Psychol ။ ဗျာ 2004; 111: 33-51 ။ [PubMed]
38 ။ Koob gf, Le Moal အမ်မူးယစ်ဆေးအလွဲသုံးမှု: Hedonic homeostatic dysregulation ။ သိပ္ပံ။ 1997; 278: 52-58 ။ [PubMed]
39 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်း။ Annu ။ ဗျာ Psychol ။ 2003; 54: 25-53 ။ [PubMed]
40 ။ Hyman SE, Malenka RC ။ စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက်: အဆိုပါမလှူ၏ Neurobiology နှင့်၎င်း၏ဇွဲ။ neuroscience ။ 2001; 2: 695-703 ။ [PubMed]
41 ။ Newcomb M ကမြီးကောင်ပေါက်အကြား Harlow အယ်လ်ဘဝကဖြစ်ရပ်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှု: အသက်တာ၌ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်များရိပ်မိဆုံးရှုံးမှုဖြန်ဖြေဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 1986; 51: 564-577 ။ [PubMed]
42 ။ ဘရောင်း RI က။ လောင်းကစားစှဲ, arousal နှင့်အမူအကျင့်ပြောင်းပြန်သို့မဟုတ် relapses တစ်ဦးထိခိုက်စေ / ဆုံးဖြတ်ချက်ချရှင်းပြချက်။ int ။ ဂျေစွဲ။ 1987; 22: 1053-1067 ။ [PubMed]
43 ။ Newcomb MD, Bentler pm တွင်။ တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှု: ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးပြဿနာများအပေါ်ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်လူမှုရေးအထောက်အပံ့သက်ရောက်မှု။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 1988; 97: 64-75 ။ [PubMed]
44 ။ Chassin L ကို, မန်း LM, Sher KJ ။ self-အသိအမြင်သီအိုရီ, အရက်၏မိသားစုသမိုင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အရက်ပါဝင်မှု။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 1998; 97: 206-217 ။ [PubMed]
45 ။ Cooper က ML, စယ် M က, Frone MR ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အရက်ဆိုးကျိုးများအလုပ်လုပ်: စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အရက်သောက်တစ်ဦးစမ်းသပ်။ ဂျေကနျြးမာရေး Soc ။ ပြုမူနေ။ 1990; 31: 260-276 ။ [PubMed]
46 ။ သေတမ်းစာက TA, Vaccaro: D, McNamara G. အဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအတွက်ဘဝဖြစ်ရပ်များ, မိသားစုပံ့ပိုးကူညီမှုနှင့်အရည်အချင်းကိုများ၏အခန်းကဏ္ဍ: အားနည်းချက်များနှင့်အကာအကွယ်အချက်များတစ်ဦးစမ်းသပ်။ နံနက်။ ဂျေ Community ။ Psychol ။ 1992; 20: 349-374 ။
47 ။ Johnson က V ကို, Pandina RJ ။ စိတ်ဖိစီးမှု, နည်းဗျူဟာများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း, အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပြဿနာများတို့တွင်ဆက်ဆံရေး၏ longitudinal စာမေးပွဲ။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 1993; 17: 696-702 ။ [PubMed]
48 ။ Johnson က V ကို, Pandina RJ ။ တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအကြားအရက်သေစာပြဿနာများကို: စိတ်ဖိစီးမှု, ဖြေရှင်းနှင့်ကျား, မ၏ longitudinal လွှမ်းမိုးမှု။ Subst ။ တလွဲအသုံးပြုခြင်းကိုသုံးပါ။ 2000; 35: 669-686 ။ [PubMed]
49 ။ Turner RJ, လွိုက် DA ။ တစ်သက်တာစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး: တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာဒုက္ခ၏အရေးပါမှုကို။ ဂျေကနျြးမာရေး Soc ။ ပြုမူနေ။ 1995; 36: 360-376 ။ [PubMed]
50 ။ သေတမ်းစာက TA, Cleary SD က။ ဘယ်လိုလူမှုရေးထောက်ပံ့မှုကိုသက်ရောက်မှုကမကထပြုခဲ့ကြသနည်း မိဘ၏အထောက်အပံ့နှင့်ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်ဦးကစမ်းသပ်။ ဂျေ Pers ။ Soc ။ Psychol ။ 1996; 71: 937-952 ။ [PubMed]
51 ။ et al Sher KJ ။ အရက်အသုံးပြုမှုမမှန်များ၏မျိုးဆက်ဂီယာအတွက်ကလေးဘဝဖိအား၏အခန်းကဏ္ဍကို။ ဂျေလုံး။ အရက်။ 1997; 58: 414-427 ။ [PubMed]
52 ။ ကော်စတာ FM ရေ, Jessor R ကို, တာဘိုင်က MS ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်နှင့်အကာအကွယ်အချက်များ၏အခန်းကဏ္ဍကို: ဆယ်ကျော်သက်ပြဿနာအရက်သောက်သို့ပြောင်းလဲ။ ဂျေလုံး။ အရက်။ 1999; 60: 480-490 ။ [PubMed]
53 ။ Perkins HW ။ ကောလိပ်နှင့် postcollegiate ငယ်ရွယ်လူကြီးအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-လှုံ့ဆော်မှုအရက်သောက်: ဘဝလမျးစဉျနှင့်ကျား, မပုံစံများ။ ဂျေလုံး။ အရက်။ 1999; 60: 219-227 ။ [PubMed]
54 ။ et al Burt လုပ် SA ။ မိဘကလေးပဋိပက္ခနှင့်ကလေးဘဝ externalizing မမှန်တို့တွင် comorbidity ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 60: 505-513 ။ [PubMed]
55 ။ Barrett တစ်ဦး, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အစောပိုင်းလူကြီးအတွက် Turner R. မိသားစုဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုပြဿနာများကို: ဆက်ဆံရေးများအတွက်ဆန်းစစ်ရှင်းလင်းချက်။ စွဲလမ်း။ 2006; 101: 109-120 ။ [PubMed]
56 ။ Dembo R ကို, et al ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်ဆေးရွက်ကြီးအကြားဆက်ဆံရေးဟာ, အရက်နှင့်လူငယ်ထိန်းသိမ်းရေးစင်တာအတွက်လူငယ်များအကြားတရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ int ။ ဂျေစွဲ။ 1988; 23: 351-378 ။ [PubMed]
57. Harrison PA, Fulkerson JA, Beebe TJ ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသားကောင်များအကြားပစ္စည်းဥစ္စာများစွာသုံးစွဲခြင်း။ ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးမှုနှင့်လျစ်လျူရှုမှု။ 1997; 21: 529-539 ။ [PubMed]
58 ။ Clark က D:, Lesnick L ကို, Hegedus အေစိတ်ဒဏ်ရာနှင့်အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်မှီခိုနှင့်အတူဆယ်ကျော်သက်အခြားဆိုးရွားသောဘဝဖြစ်ရပ်များ။ ဂျေ Am ။ Acad ။ ကလေးသူငယ်မြီးကောင်ပေါက်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997; 36: 1744-1751 ။ [PubMed]
59 ။ Widom CS, Weiler BL, Cottler LB. ကလေးဘဝသားကောင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု: အလားအလာများနှင့်နောက်ကြောင်းပြန်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုနှိုင်းယှဉ်။ ဂျေနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ Clin ။ Psychol ။ 1999; 67: 867-880 ။ [PubMed]
60 ။ Breslau N ကို, Davis က, G, Schultz အယ်လ် Posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါနှင့်နီကိုတင်း, အရက်နှင့်စိတ်ဒဏ်ရာကြုံတွေ့ကြသူပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်နဲ့အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးမမှန်များ၏ဖြစ်ပွားမှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 60: 289-294 ။ [PubMed]
61 ။ et al Sher KJ ။ အရက်သမား၏သားသမီးများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ: Putative အန္တရာယ်အချက်များ, ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့် psychopathology ။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 1991; 100: 427-448 ။ [PubMed]
62 ။ et al Cooper က ML ။ အရက်သောက်စိတျရငျးသုံးရှုထောင်အတိုင်းအတာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် validation ကို။ Psychol ။ အကဲဖြတ်ရန်။ 1992; 4: 123-132 ။
63 ။ Laurent L ကို, Catanzaro SJ, Callan MK ။ စိတ်ဖိစီးမှု, အရက်-related မျှော်လင့်ထားနှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဦးစားပေး: အ Cooper က et al ၏မြီးကောင်ပေါက်နှင့်အတူတစ်ဦးကပွား။ (1992) မော်ဒယ်။ ဂျေလုံး။ အရက်။ 1997; 58: 644-651 ။ [PubMed]
64 ။ Chen က JH, et al ။ ကျန်းမာရေးရလဒ်များအပေါ်ဝမ်းနည်းပူဆွေး-related စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ Psychol ။ Med ။ 1999; 29: 367-380 ။ [PubMed]
65 ။ Stice အီး, Barrera M က, Jr. ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်သေစာအသုံးပြုမှု Chassin အယ်လ်အလားအလာ differential ကိုခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ပြဿနာအသုံးပြုမှု: အကျိုးသက်ရောက်မှုများယန္တရားများကိုဆန်းစစ်။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 1998; 107: 616-628 ။ [PubMed]
66 ။ et al Chassin L ကို။ တစ်ဦးအနောက်အလယ်ပိုင်းဒေသတစ်ခွင်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်2ဆယ်စုနှစ်ပြီးနောက်ဆေးလိပ်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်-related ယုံကြည်ချက်အတွက်သမိုင်းဝင်အပြောင်းအလဲများကို။ ကနျြးမာရေး Psychol ။ 2003; 22: 347-353 ။ [PubMed]
67 ။ Measelle JR, Stice အီး, Springer DW ။ လူမှုရေးအထောက်အပံ့သက်ရောက်မှုကိုစိစစ်: အကအနုတ်တစ်အလားအလာစမ်းသပ်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမော်ဒယ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Psychol ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2006; 20: 225-233 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
68 ။ et al Kandel DB ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားဥစ္စာအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်စိတ်ရောဂါမမှန်: ကလေးကူးစက်ရောဂါနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders (MECA) လေ့လာများအတွက်နည်းလမ်းများကနေတွေ့ရှိချက်။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ ကလေးသူငယ် Psychol ။ 1997; 25: 121-132 ။ [PubMed]
69 ။ ရှငျဘုရငျ, CA, et al ။ စိတ်ဓာတ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် Co-နေကြလို့ပဲအရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုခန့်မှန်း။ ဂျေ Am ။ Acad ။ ကလေးသူငယ်မြီးကောင်ပေါက်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1996; 35: 743-751 ။ [PubMed]
70 ။ Rohde L ကိုရောမ T က, Szobot ကို C, et al ။ Dopamine Transporter ဗီဇ, methylphenidate နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါအတွက်ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုတုံ့ပြန်: တစ်ရှေ့ပြေးလေ့လာမှု။ synapses ။ 2003; 48: 87-89 ။ [PubMed]
71 ။ Riggs PD, Whitmore EA ၏။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း Disorders နှင့်နှောင့်အယှက်အပြုအမူ Disorders ။ ယားစာနယ်ဇင်း; ဝါရှင်တန်ဒီစီ: 1999 ။
72 ။ et al Rao ကဦး။ စိတ်ဓာတ်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်အချက်များ။ ဂျေ Am ။ Acad ။ ကလေးသူငယ် Adolsc ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 38: 1109-1117 ။
73 ။ et al Kessler RC ။ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဝန်ဆောင်မှုအသုံးချဘို့အကျိုးသက်ရောက်မှု: စွဲလမ်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ cooccurring ၏ရောဂါ။ နံနက်။ ဂျေ Orthopsychiatry ။ 1996; 66: 17-31 ။ [PubMed]
74 ။ Sinha R ကို, Rounsaville BJ ။ စိတ်ဓာတ်ပစ္စည်းဥစ္စာချိုးဖောက်လိင်ကွဲပြားမှု။ ဂျေ Clin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 63: 616-627 ။ [PubMed]
75 ။ et al Clark က DB ။ မြီးကောင်ပေါက်အတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုများ, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အရက်သုံးစွဲခြင်းမမှန်: စတင်ခြင်းနှင့်ရလဒ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2003; 69: 51-60 ။ [PubMed]
76 ။ Brady KT, Sinha R. Co-ဖြစ်ပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်: နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှု၏ neurobiological ဆိုးကျိုးများ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1483-1493 ။ [PubMed]
77 ။ Cicchetti: D, Toth SL ။ ကလေးသူငယ်တို့ကိုမတရားသဖွငျ့။ Annu ။ ဗျာ Clin ။ Psychol ။ 2005; 1: 409-438 ။ [PubMed]
78 ။ ရိဒ် PL, အန်သိုနီ JC, စိတ်ဒဏ်ရာနှင့် posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါထိတွေ့ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်မူးယစ်ဆေးပြဿနာများ၏ Breslau N. အဖြစ်အပျက်: အစောပိုင်းဘဝအတွေ့အကြုံများနှင့်ဓာတ်အရေးပါ? Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး psyche ။ 2007; 64: 1435-1442 ။
79 ။ Hammen C. စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း။ Annu ။ ဗျာ Clin ။ Psychol ။ 2005; 1: 293-319 ။ [PubMed]
80 ။ Kessler RC ။ dual-ရောဂါ၏ရောဂါ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 56: 730-737 ။ [PubMed]
81 ။ Turner RJ, လွိုက် DA ။ ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်တိုးပွားလာသောဒုက္ခနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမှီခို: လူမျိုးရေး / တိုင်းရင်းသားထူးခွားသညျ့။ စွဲလမ်း။ 2003; 98: 305-315 ။ [PubMed]
82 ။ လွိုက် DA, Turner RJ ။ တိုးပွားလာသောအသက်တာကိုအချိန်အခကျအခဲမြားနှငျ့မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးအတွက်အရက်မှီခို။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2008; 93: 217-226 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
83 ။ Sinha R. စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု။ ခုနှစ်တွင်: Steckler NHKT, Reul JMHM, အယ်ဒီတာများ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဦးနှောက်၏လက်စွဲစာအုပ်။ အပိုင်း2စိတ်ဖိစီးမှု: Integrated နှင့်လက်တွေ့ aspect ။ vol ။ 15 ။ Elsevier; အမ်စတာဒမ်: 2005 ။ စစ။ 333-356 ။
84 ။ Miczek Ka, et al ။ ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ရှုံးနိမ့်: peptidergic နှင့် aminergic mesocorticolimbic ဆားကစ်အတွက်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်မြဲဆိုးကျိုးများ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2004; 27: 787-802 ။ [PubMed]
85 ။ lu, L, Shaham Y. opiate နှင့် psychostimulant စွဲအတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍ: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည်သက်သေအထောက်အထား။ ခုနှစ်တွင်: Steckler T က, Kalin N ကို, Reul J ကို, အယ်ဒီတာများ။ Integrated နှင့်လက်တွေ့ aspect: စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဦးနှောက်, အပိုင်း2စိတ်ဖိစီးမှု၏လက်စွဲစာအုပ်။ vol ။ 15 ။ Elsevier; San Diego မှ,, CA: 2005 ။ စစ။ 315-332 ။
86 ။ le အေဒီ, et al ။ အရက်ရှာနှင့်ကြွက်များတွင်အရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် reinstatement အတွက် alpha-2 adrenoceptors ၏အခန်းက္ပ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2005; 179: 366-373 ။ [PubMed]
87 ။ Cleck ဖြစ်မှု, Blendy ဂျေအေ။ မူးယစ်ဆေးစွဲအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှု၏ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများ: ပိုဆိုးတဲ့မကောင်းတဲ့အရာ Making ။ ဂျေ Clin ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ 2008; 118: 454-461 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
88 ။ et al Higley JD ။ အရက်အလွဲသုံးစားမှု Nonhuman မျောက်မော်ဒယ်: အရက်သောက်စောစောအတွေ့အကြုံ, ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 1991; 88: 7261-7265 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
89 ။ Kosten က TA, Miserendino MJD, မွေးကင်းစကလေးများအထီးကျန်မှုတွေစိတ်ဖိစီးမှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး Kehoe P. Enhanced ဝယ်ယူ။ ဦးနှောက် Res ။ 2000; 875: 44-50 ။ [PubMed]
90 ။ et al lu L ကို။ ကြွက်များတွင် opiate နှင့် psychostimulant အားဖြည့်, reinstatement နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုအပေါ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2003; 27: 457-491 ။ [PubMed]
91 ။ et al, Moffett MC ။ မိခင်ခွဲခြာကြွက်များတွင်လူကြီးအတွက်မူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုပုံစံများပွောငျးလဲ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ Pharmacol ။ 2007; 73: 321-330 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
92 ။ Boyce-Rustay JM, ကင်မရွန် HA, ကေတီဟုမ်းအေနာတာရှည်ရေကူးစိတ်ဖိစီးမှုကြွက်တွေမှာအီသနော၏စူးရှသောအမူအကျင့်သက်ရောက်မှုမှ sensitivity ကိုပွောငျးလဲ။ Physiol ။ ပြုမူနေ။ 2007; 91: 77-86 ။ [PubMed]
93 ။ et al ပန်းခြံ MK ။ အသက်, လိင်နှင့်အစောပိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကြွက်များတွင်နီကိုတင်း / acetaldehyde-သွေးဆောင်အမူအကျင့်များနှင့် endocrine တုံ့ပြန်မှုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှုကိုအထောက်အကူပြု။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 2007; 86: 297-305 ။ [PubMed]
94 ။ et al Kosten က TA ။ မွေးကင်းစကလေးအထီးကျန်မှုတွေကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြွက်များတွင်တုံ့ပြန်အစားအစာဝယ်ယူပိုကောင်းစေပါတယ်။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက် Res ။ 2004; 151: 137-149 ။ [PubMed]
95 ။ Kosten က TA, Zhang က XY, Kehoe P. မွေးကင်းစကလေးများအထီးကျန်မှုတွေအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအမျိုးသမီးကြွက်များတွင်ကင်းနှင့်စားနပ်ရိက္ခာစီမံခန့်ခွဲမှုကြီးထွား။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 70-76 ။ [PubMed]
96 ။ မူးယစ်ဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှအားနည်းချက်အတွက် Lynch ဒဗလျူလိင်ကွဲပြားမှု။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2006; 14: 34-41 ။ [PubMed]
97 ။ et al Becker က JB ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ရောဂါ: တစ် predisposing အချက်အမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းသလဲ? ဂျေ neuroscience ။ 2007; 27: 11851-11855 ။ [PubMed]
98 ။ et al Tschann JM ။ အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်ဥစ္စာအသုံးပြုမှုစတင်: pubertal အချိန်ကိုက်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ကနျြးမာရေး Psychol ။ 1994; 13: 326-333 ။ [PubMed]
99 ။ ဖာဂူဆ DM, Horwood LJ ။ ငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်အစောပိုင်းစတင်ခြင်းဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှု။ စွဲလမ်း။ 1997; 92: 279-296 ။ [PubMed]
100 ။ et al Simons သည် JS ။ အဆိုပါ9/ 11 / 2001 တိုက်ခိုက်မှုများကိုတုံ့ပြန်ရန်အမေရိကန်ကြက်ခြေနီဘေးအန္တရာယ်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်သားများအကြားအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့် PTSD ရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားအသင်းအဖွဲ့များ။ နံနက်။ ဂျေမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2005; 31: 285-304 ။ [PubMed]
101 ။ Lee က CM, အိမ်နီးချင်းကို C, ဝုဒ် BA ဘွဲ့။ ဆေးခြောက်စိတ်ရင်း: ဆေးခြောက်အသုံးပြုငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက် '' အကြောင်းရင်းများ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2007; 32: 1384-1394 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
102 ။ သေတမ်းစာက TA, et al ။ အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောပံ့ပိုးမှုများကိုသာဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမှထိခိုက်စေ: တစ် longitudinal လေ့လာမှုတစ်ခု bi-ရှုထောင်မော်ဒယ်၏စမ်းသပ်မှု။ Psychol ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 1999; 13: 327-338 ။
103 ။ သေတမ်းစာက TA, et al ။ ရှုထောင့်ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းခြင်း, အသက်ရှင်ခြင်းကိုစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း: တစ်ငုပ်လျှိုးနေတိုးတက်မှုနှုန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 2001; 110: 309-323 ။ [PubMed]
104 ။ သေတမ်းစာက TA, et al ။ အမူအကျင့်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Self-ထိန်းချုပ်မှု: အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းသားများနမူနာအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမှဆက်ဆံရေး။ Psychol ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2006; 20: 265-278 ။ [PubMed]
105 ။ et al Siqueira L ကို။ ဆယ်ကျော်သက်များဆေးခြောက်သုံးသုံးစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုနည်းလမ်းများ၏ဆက်ဆံရေး။ Subst ။ ခရီးသည်တင်ကားတစ်စီး။ 2001; 22: 157-166 ။ [PubMed]
106 ။ ထောပတ် je ။ မိသားစုဖိအားများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း: ပြဿနာကိုအသုံးပြုခြင်းမှတစ်ဦးကလမ်းကြောင်း။ ဂျေမြီးကောင်ပေါက်။ 2002; 25: 645-654 ။ [PubMed]
107 ။ McGee R ကို, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေအစောပိုင်းလူကြီးဖို့ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး၏ longitudinal လေ့လာမှု။ စွဲလမ်း။ 2000; 95: 491-503 ။ [PubMed]
108 ။ et al Hayatbakhsh MR ။ မိဘများ DSM-IV ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းမမှန် '' အိမ်ထောင်ရေးခွအေနမြေားငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ကြိုတင်ခန့်မှန်း '' သလား? တစ်ဦးကအလားအလာလေ့လာမှု။ စွဲလမ်း။ 2006; 101: 1778-1786 ။ [PubMed]
109 ။ Windle M က, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကနေငယ်ရွယ်လူကြီးဖို့ဆေးခြောက်သုံးစွဲမှု Wiesner အမ်လမ်းကြောင်း: ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ရလဒ်များကို။ dev ။ Psychopathol ။ 2004; 16: 1007-1027 ။ [PubMed]
110 ။ Weiss EL, Longhurst JG, Mazure CM ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neurobiological ဆက်စပ်မှု: အမျိုးသမီးတွေအတွက်စိတ်ကျရောဂါများအတွက်အန္တရာယ်အချက်အဖြစ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 156: 816-828 ။ [PubMed]
111 ။ et al Macmillan HL ။ တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက်ကလေးဘဝအလွဲသုံးစားမှုနှင့်တစ်သက်တာ psychopathology ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 158: 1878-1883 ။ [PubMed]
112 ။ တစ်ဦးကပြန်လည်သုံးသပ်: ငယ်စဉ်ကလေးဘဝလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုပြဿနာများအကြား Simpson T က, Miller ကဒဗလျူ Concomitance ။ Clin ။ Psychol ။ ဗျာ 2002; 22: 27-77 ။ [PubMed]
113 ။ Hyman က S, et al ။ ကိုကင်းမှီခိုလူကြီးများအတွက်အစောပိုင်းစိတ်ဒဏ်ရာအင်တာဗျူးက Short Form ကိုတစ်ကျား-တိကျတဲ့ psychometric ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2004; 30: 847-852 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
114 ။ Hyman သည် SM, Garcia က M ကို, Sinha R. ကျားငယ်စဉ်ကလေးဘဝမတရားသဖွငျ့နှင့်ကိုကင်းမှီခိုလူကြီးများအတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းစတင်ခြင်း, တင်းမာမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်ပြင်းထန်မှုအမျိုးအစားများအကြားတိကျသောအသင်းအဖွဲ့များ။ နံနက်။ ဂျေမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု။ 2006; 32: 655-664 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
115 ။ di Chiara, G လူသားများအားဖြင့်စော်ကား Imperato အေမူးယစ်ဆေးဝါးဦးစားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ mesolimbic စနစ် Synaptic dopamine ပြင်းအားတိုးမြှင့်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 1988; 85: 5274-5278 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
116 ။ Spanagel R ကို, Weiss အက်ဖ်ဆုလာဘ်၏ dopamine အယူအဆ: အတိတ်နှင့်လက်ရှိအခြေအနေ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 1999; 22: 521-527 ။ [PubMed]
117 ။ ပီယပ် RC, Kumaresan V. အဆိုပါ mesolimbic dopamine စနစ်က: အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်နောက်ဆုံးဘုံလမ်းကြောင်း? neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2006; 30: 215-238 ။ [PubMed]
118 ။ Kauer ဂျာ Malenka RC ။ Synaptic plasticity နှင့်စွဲလမ်း။ နတ်။ ဗျာ neuroscience ။ 2007; 8: 844-858 ။ [PubMed]
119 ။ et al Breiter HC ။ လူ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်း၏ acute ဆိုးကျိုးများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1997; 19: 591-611 ။ [PubMed]
120 ။ Volkow N ကို, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, et al ။ လူသားတွေအတွက် psychostimulants ၏အားဖြည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကဦးနှောက် dopamine နဲ့ D-Sub-2 receptors ၏ထေိုအတွက်တိုးနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ ဂျေ Pharm ။ Expt ။ Ther ။ 1999; 291: 409-415 ။
121 ။ Drevets W က, Gautier ကို C, စျေး JC, et al ။ လူ့ ventral striatum အတွက်ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် Euphoria ပီတိတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 49: 81-96 ။ [PubMed]
122 ။ Leyton M က, et al ။ ကျန်းမာယောက်ျားတစ်ဦးပေ / [11C] raclopride လေ့လာမှု: extracellular dopamine, မူးယစ်ဆေးလိုနှင့်အသစ်အဆန်းရှာအတွင်းဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင်တိုး။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 27: 1027-1035 ။ [PubMed]
123 ။ et al Brody AL ။ တစ်ဦးကပဏာမလေ့လာမှု: cue-သွေးဆောင်စီးကရက်တဏှာနှင့် bupropion-ကုသဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် anterior cingulate cortex activation ၏ attenuation ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2004; 130: 269-281 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
124 ။ Martinez: D, et al ။ အရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု၏ neurochemistry Imaging ။ Neuroimaging Clin ။ N. Am ။ 2007; 17: 539-555 ။ [PubMed]
125 ။ et al Oswald LM ။ ventral striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်, cortisol လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်စိတ်ကြွဆေးမှပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေး။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 821-832 ။ [PubMed]
126 ။ et al Yoder KK ။ Dopamine: D (2) အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအရက်ဖို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္တုံ့ပြန်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2005; 29: 965-970 ။ [PubMed]
127 ။ et al Thierry လေး။ စိတ်ဖိစီးမှုများက mesocortical DA စနစ်၏ရွေးချယ် activation ။ သဘာဝ။ 1976; 263: 242-244 ။ [PubMed]
128 ။ Dunn AJ ။ ဦးနှောက် dopaminergic စနစ်များစိတ်ဖိစီးမှု-related activation ။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1988; 537: 188-205 ။ [PubMed]
129 ။ Takahashi H ကို, et al ။ အဆိုပါ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်နီကိုတင်းနှင့် footshock စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ဦးနှောက် Res ။ နွားလား။ 1998; 45: 157-162 ။ [PubMed]
130 ။ Kalivas PW, စိတ်ဖိစီးမှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens ၏ shell ကိုအတွက် dopamine ဂီယာ၏ Duffy P. ရွေးချယ် activation ။ ဦးနှောက် Res ။ 1995; 675: 325-328 ။ [PubMed]
131 ။ Piazza PV, Le Moal ML ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးစားမှုမှအားနည်းချက်၏ Pathophysiological အခြေခံ: စိတ်ဖိစီးမှု, glucocorticoids နှင့် dopaminergic အာရုံခံအကြားတစ်ဦးအပြန်အလှန်၏အခန်းကဏ္ဍ။ Annu ။ ဗျာ Pharmacol ။ Toxicol ။ 1996; 36: 359-378 ။ [PubMed]
132 ။ et al Rouge-ပိုတငျးက F ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု corticosterone ကလွှမ်းမိုးလျက်ရှိသည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 1998; 10: 3903-3907 ။ [PubMed]
133 ။ Barrot M က, et al ။ နျူကလီးယပ် accumbens ၏ shell ကို၏ dopaminergic Hyper-တုန့်ပြန်ဟော်မုန်း-မှီခိုသည်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2000; 12: 973-979 ။ [PubMed]
134 ။ et al Pacak K သည်။ နာတာရှည် hypercortisolemia နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine ပေါင်းစပ်နှင့်လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် accumbens: တစ်ဦးအတွက် Vivo microdialysis လေ့လာမှု။ Neuroendocrinology ။ 2002; 76: 148-157 ။ [PubMed]
135 ။ Overton PG, et al ။ corticosterone အားဖြင့် mineralocorticoid receptors ၏ဦးစားပေးသိမ်းပိုက်ကြွက် midbrain dopaminergic အာရုံခံအတွက်ပစ်ခတ်ချိုမှု-သွေးဆောင်ပေါကျကှဲပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1996; 737: 146-154 ။ [PubMed]
136 ။ Saal: D, et al ။ အလွဲသုံးစားမှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါး dopamine အာရုံခံတစ်ဘုံ Synaptic လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပေါ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 37: 577-582 ။ [PubMed]
137 ။ et al Ungless MA ။ Corticotropin-releasing အချက် dopamine အာရုံခံအတွက် CRF အဲဒီ receptor2မှတဆင့် NMDA receptors potentiate မှ CRF binding ပရိုတိန်းလိုအပ်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 39: 401-407 ။ [PubMed]
138 ။ ဝမ် B, et al ။ မူးယစ်ဆေးရှာဖို့စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင် relapse အတွက်အခန်းကဏ္ဍ: ကင်းအတွေ့အကြုံကို corticotropin-releasing အချက်အားဖြင့် midbrain အချိုမှုများနှင့် dopamine ထိန်းချုပ်တည်စေ။ ဂျေ neuroscience ။ 2005; 25: 5389-5396 ။ [PubMed]
139 ။ et al Pruessner JC ။ [11C] raclopride သုံးပြီး positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု: တစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသားတွေအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အစောပိုင်းဘဝမိခင်စောင့်ရှောက်မှုက၎င်း၏ဆက်ဆံရေးတုန့်ပြန် Dopamine လွှတ်ပေးရန်။ ဂျေ neuroscience ။ 2004; 24: 2825-2831 ။ [PubMed]
140 ။ et al Wand GS ။ စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုမှ cortisol တုံ့ပြန်မှုများအသင်းမှ။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 32: 2310-2320 ။ [PubMed]
141 ။ စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူအထပ်ထပ်ကုသမှုအပြီးတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အတွက်ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခ ALTER ။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ neuroscience ။ 1999; 11: 1598-1604 ။ [PubMed]
142 ။ Liston ကို C, et al ။ prefrontal cortical dendritic shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာစိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ပွောငျးလဲသိမှုဆိုင်ရာအာရုံအာရုံစူးစိုက်မှုအစုပုံစံအပြောင်းအလဲလုပ်အတွက်ရွေးချယ်ချို့ယွင်းကြိုတင်ခန့်မှန်း။ ဂျေ neuroscience ။ 2006; 26: 7870-7874 ။ [PubMed]
143 ။ Sorg BA, Kalivas PW ။ အဆိုပါ ventral striatum အတွက် extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်အပေါ်ကိုကင်းနှင့်အ footshock စိတ်ဖိစီးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ ဦးနှောက် Res ။ 1991; 559: 29-36 ။ [PubMed]
144 ။ McCullough ld, Salamone JD ။ Anxiogenic မူးယစ်ဆေးဝါးများ beta ကို-CCE နှင့်အပြည်ပြည်သွား 7142 နျူကလိယ accumbens အတွက် extracellular dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 1992; 109: 379-382 ။ [PubMed]
145 ။ et al Becerra L ကို။ noxious အပူလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် circuitry activation ဆုချ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2001; 32: 927-946 ။ [PubMed]
146 ။ et al Jensen J ကို။ ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများ၏မျှော်လင့်အတွက် ventral striatum ၏တိုက်ရိုက် activation ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 40: 1251-1257 ။ [PubMed]
147 ။ Berridge K သည်, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ Hedonic သက်ရောက်မှု, ဆုလာဘ်သင်ယူမှု, ဒါမှမဟုတ်မက်လုံးပေး salience: ဆုလာဘ်အတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ? ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 1998; 28: 309-369 ။ [PubMed]
148 ။ Bindra ဃဘယ်လိုသပ္ပါယ်အပြုအမူထုတ်လုပ်: တုံ့ပြန်မှုအားဖြည့်မယ့်သိမှုဆိုင်ရာအာရုံ-လှုံ့ဆျောမှုကအခြားရွေးချယ်စရာ။ ပြုမူနေ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံ။ 1978; 1: 41-91 ။
149 ။ Ikemoto S က, Panksepp ဂျေနျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအတွက် dopamine accumbens: အထူးရည်ညွှန်းနှင့်အတူတစ်ဦးကစညျးလုံးအနက်ကိုဆုချစားမှုရန်။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 1999; 31: 6-41 ။ [PubMed]
150 ။ Salamone JD, ဝမ်းကွဲက MS, Snyder BJ ။ နျူကလိယ၏အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို dopamine accumbens: အ anhedonia အယူအဆနှင့်အတူအင်ပါယာနဲ့အယူအဆရေးရာပြဿနာများကို။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 1997; 21: 341-359 ။ [PubMed]
151 ။ Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ်။ neuroscience ။ 2005; 8: 1481-1489 ။ [PubMed]
152 ။ Baler RD, Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲ: နှောင့်အယှက် Self-ထိန်းချုပ်မှုများ neurobiology ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Mol ။ Med ။ 2006; 12: 559-566 ။ [PubMed]
153 ။ Mantsch JR, Saphier: D, Goeders NE ။ Corticosterone ကြွက်များတွင်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး၏ဝယ်ယူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်: အမျိုးအစား II ကို glucocorticoid အဲဒီ receptor agonist dexamethasone ၏အတိုက်အခံဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 1998; 287: 72-80 ။ [PubMed]
154 ။ Goeders NE ။ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးနှင့်ကိုကင်းအားဖြည့်။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002; 27: 13-34 ။ [PubMed]
155 ။ Goeders NE ။ စိတ်ဖိစီးမှု, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ။ Curr ။ dir ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။ သိပ္ပံ။ 2004; 13: 33-35 ။
156 ။ Marinelli M က, et al ။ Corticosterone ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian Secret differential ကိုကင်းနှင့်အမော်ဖင်းအကိုက် dopamine-mediated psychomotor အကျိုးသက်ရောက်မှုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 1994; 14: 2724-2731 ။ [PubMed]
157 ။ Marinelli M က, et al ။ မော်ဖင်းအကိုက်မှ Dopamine-မှီခိုတုံ့ပြန်မှု glucocorticoid receptors ပေါ်မူတည်သည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 1998; 95: 7742-7747 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
158 ။ et al Deroche-Gamonet V ကို။ ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုလျှော့ချဖို့အလားအလာပစ်မှတ်အဖြစ် glucocorticoid အဲဒီ receptor ။ ဂျေ neuroscience ။ 2003; 23: 4785-4790 ။ [PubMed]
159 ။ မော်ဂန်: D, et al ။ မျောက်များအတွက်လူမှုကြီးစိုး: Dopamine D2 receptors နှင့်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှု။ နတ်။ neuroscience ။ 2002; 5: 88-90 ။ [PubMed]
160 ။ Plotsky pm တွင်, Meaney MJ ။ အစောပိုင်း postnatal အတွေ့အကြုံကို hypothalamic corticotrophon-releasing အချက် (CRF) mRNA, ပျမ်းမျှထူးမြတ်သော CRF အကြောင်းအရာနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်လွှတ်ပေးရန်ပွောငျးလဲ။ Mol ။ ဦးနှောက် Res ။ 1993; 18: 195-200 ။ [PubMed]
161 ။ လျူ: D, et al ။ စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်း hypothalamus နှင့် hypothalamic-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှုများ၏ paraventricular နျူကလိယအတွက် norepineperine ၏အတွင်း Vivo လွှတ်ပေးရန်စောစောဘဝဖြစ်ရပ်များ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Neuroendocrinol ။ 2000; 12: 5-12 ။ [PubMed]
162 ။ Ladd CO, et al ။ ဆိုးရွားသောအစောပိုင်းအတွေ့အကြုံကိုမှရေရှည်အမူအကျင့်များနှင့် neuroendocrine အလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်။ prog ။ ဦးနှောက် Res ။ 2000; 122: 81-103 ။ [PubMed]
163 ။ et al Dallman MF ။ တုံ့ပြန်ချက်, ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့်နို့တိုက်ကျွေး: စိတ်ဖိစီးမှုစဉ်အတွင်း hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏စည်းမျဉ်း။ neuroscience ။ 1994; 6: 205-213 ။
164 ။ Caldji ကို C, et al ။ ဂိဗာမွို့နှင့်ဗဟို benzodiazepine အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်နှင့်ကြွက်များတွင်အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်ကြောက်တတ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အစောပိုင်းမွေးမြူပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရောက်မှု။ Neuropsychopharmacology ။ 2000; 22: 219-229 ။ [PubMed]
165 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Becker က JB, Presty SK ကို။ စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်လှည့်အမူအကျင့်များရေရှည်ပံ့ပိုးကူညီခြင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးဖို့တစ်ခုတည်းထိတွေ့မှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်: လိင်ကွဲပြားမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1982; 253: 231-241 ။ [PubMed]
166 ။ Kalivas PW, မော်တာလှုပ်ရှားမှု drug- နှင့်စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်အကဲဆတ်ခြင်း Initiative နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ Stewart ကဂျေ Dopmaine ဂီယာ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 1991; 16: 223-244 ။ [PubMed]
167 ။ ဒိုဟာဆီ MD, ထပ်ခါတလဲလဲနေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ဆက်စပ် mesolimbic နှင့် nigrostriatal dopamine လွှတ်ပေးရေး Gratton အေ High-Speed ​​ကို chronoamperometric တိုင်းတာ။ ဦးနှောက် Res ။ 1992; 586: 295-302 ။ [PubMed]
168 ။ et al ဘရိတ် WG ကို။ mesococorticolimbic dopamine နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များတွင် psychostimulants နှင့်ဖိအားအပြုအမူတုံ့ပြန်မှုအပေါ်အစောပိုင်း postnatal မွေးမြူအခြေအနေများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ အီးယူ။ ဂျေ neuroscience ။ 2004; 19: 1863-1874 ။
169 ။ Weinshenker: D, et al ။ နာတာရှည် norepinephrine ချို့တဲ့နှင့်အတူကြွက်တွေစိတ်ကြွဆေး-sensitized တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဆင်တူနေသည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 2002; 99: 13873-13877 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
170 ။ Vanderschuren LJ, Beemster P ကို, Schoffelmeer AN ။ psychostimulant-သွေးဆောင် psychomotor လှုပ်ရှားမှုအရေးကြီးတဲ့အတွက် noradrenaline ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတွင်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2003; 169: 176-185 ။ [PubMed]
171 ။ Gratton တစ်ဦးက, Sullivan က RM ။ စိတ်ဖိစီးမှု Response အတွက် prefrontal cortex ၏အခန်းက္ပ။ ခုနှစ်တွင်: Steckler T က, Kalin နယူးဟမ်းရှား, Reul JMHM, အယ်ဒီတာများ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဦးနှောက်၏လက်စွဲစာအုပ်။ vol ။ 1 ။ Elsevier; Dusseldorf: 2005 ။ စ။ 838 ။
172 ။ Wellman CL ။ နာတာရှည် corticosterone အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် medial prefrontal cortex အတွက်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံအတွက် Dendritic ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း။ ဂျေ Neurobiol ။ 2001; 49: 245-253 ။ [PubMed]
173 ။ Sullivan က RM, ကြွက်များတွင် neuroendocrine နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအပေါ် medial prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ Gratton အေနောက်ပိုင်းမှာဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ neuroscience ။ 1999; 19: 2834-2840 ။ [PubMed]
174 ။ et al Braun K သည်။ အစောပိုင်းလူမှုရေးဆင်းရဲချို့တဲ့သဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်မိခင်ခွဲခြာ Octodon degus ၏ medial prefrontal cortex အတွက် monoaminergic ဖိုင်ဘာစနစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသာသက်ရောက်သည်။ neuroscience ။ 2000; 95: 309-318 ။ [PubMed]
175 ။ DeBellis MD ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ traumatology: အရက်နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက် contributory ယန္တရား။ Psychoneuroendocrinology ။ 2002; 27: 155-170 ။ [PubMed]
176 ။ et al de ဝမ်း MD ။ ဆယ်ကျော်သက်-စတင်ခြင်းအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းမမှန်ခြင်းနှင့် comorbid စိတ်ရောဂါနှင့်အတူမြီးကောင်ပေါက်နှင့်လူငယ်လူကြီးများအတွက် Prefrontal cortex, thalamus, နှင့် cerebellar volumes ကို။ အရက်။ Clin ။ Exp ။ res ။ 2005; 29: 1590-1600 ။ [PubMed]
177 ။ Mischel W က, Shoda Y ကို, Rodriguez MI ။ ကလေးများအတွက်ဆန္ဒပြည့်၏နှောင့်နှေး။ သိပ္ပံ။ 1989; 244: 933-938 ။ [PubMed]
178 ။ Muraven M က, Baumeister RF ။ ကန့်သတ်အရင်းအမြစ်များ self-စည်းမျဉ်းများနှင့်ကွယ်ပျောက်သွား: Self-ထိန်းချုပ်မှုတစ်ခုကြွက်သားတူပါသလား Psychol ။ နွားလား။ 2000; 126: 247-259 ။ [PubMed]
179 ။ Arnsten AF လီ BM ။ အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ Neurobiology: prefrontal cortical ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအပေါ် catecholamines လွှမ်းမိုးမှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 57: 1377-1384 ။ [PubMed]
180 ။ သေတမ်းစာက TA, Stoolmiller အမ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်း၏အစောပိုင်းတင်းမာမှုအတွက် Self-ထိန်းချုပ်မှုများ၏အခန်းကဏ္ဍ: အချိန်-ကွဲပြားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဂျေနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ Clin ။ Psychol ။ 2002; 70: 986-997 ။ [PubMed]
181 ။ သေတမ်းစာက TA, et al ။ self-ထိန်းချုပ်မှု, symptomatology နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုကိုရှေ့:9နှစ်အရွယ်ကလေးများတစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာအတွက်သီအိုရီမော်ဒယ်၏စမ်းသပ်မှု။ Psychol ။ စှဲလမျးသူ။ ပြုမူနေ။ 2007; 21: 205-215 ။ [PubMed]
182 ။ et al Giancola PR စနစ်။ အလုပ်အမှုဆောင်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှု / မှီခိုဘို့အမြင့်ဆုံးအန္တရာယ်မှာ preadolescent ယောက်ျားလေးများအတွက်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ။ ဂျေလုံး။ အရက်။ 1996; 57: 352-359 ။ [PubMed]
183 ။ Giancola PR စနစ်, Mezzich AC အ, Tarter RE ။ တစ်ဦး psychoactive ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါနှင့်အတူအမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက်အတွက်နှောင့်အယှက်, ဆိုးသွမ်းခြင်းနှင့်ရန်လိုသည့်အပြုအမူ: အလုပ်အမှုဆောင်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာမှဆက်ဆံရေး။ ဂျေလုံး။ အရက်။ 1998; 59: 560-567 ။ [PubMed]
184 ။ Ernst M က, et al ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါနှင့်မပါဘဲမြီးကောင်ပေါက်အတွက်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုစတင်များ၏အမူအကျင့်ခန့်မှန်း။ ကလေးအထူးကု။ 2006; 117: 2030-2039 ။ [PubMed]
185 ။ Jentsch JD, တေလာ JR ။ Spatial အတွက်လိင်-related ကွဲပြားခြားနားမှုကြွက်များတွင်အာရုံစိုက်မှုနှင့်မော်တာ Impulse ဝေပေးလေ၏။ ပြုမူနေ။ neuroscience ။ 2003; 117: 76-83 ။ [PubMed]
186 ။ Everitt B, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ်။ neuroscience ။ 2005; 8: 1481-1489 ။ [PubMed]
187 ။ et al Oswald LM ။ Impulse နှင့်နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် striatal dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ Neuroimage ။ 2007; 36: 153-166 ။ [PubMed]
188 ။ Caspi တစ်ဦးက, et al ။ မတရားသဖွငျ့ကလေးတွေအတွက်အကြမ်းဖက်မှုသံသရာအတွက် genotype ၏အခန်းက္ပ။ သိပ္ပံ။ 2002; 297: 851-854 ။ [PubMed]
189 ။ Caspi တစ်ဦးက, et al ။ စိတ်ကျရောဂါအပေါ်ဘဝမှာစိတ်ဖိစီးမှု၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု: အ 5-HTT ဗီဇတစ်ခု polymorphic နေဖြင့်ဖြည့်ညှင်း။ သိပ္ပံ။ 2003; 301: 386-389 ။ [PubMed]
190 ။ et al Kaufman J ကို, ယန် BZ, ဒေါက်ဂလပ်-Palumberi H ကို။ လူမှုအထောက်အကူများနှင့်မတရားသဖွငျ့အမြိုးသားတို့အတွက် serotonin Transporter ဗီဇအလယ်အလတ်စိတ်ကျရောဂါ။ proc ။ နတ်။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 2004; 101: 17316-17321 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
191 ။ et al Kaufman J ကို။ ဦးနှောက်-ဆင်းသက်လာ neurotrophic အချက်-5-HTTLPR ဗီဇ interaction ကနှင့်ကလေးများအတွက်စိတ်ကျရောဂါ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ modifiers ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 59: 673-680 ။ [PubMed]
192 ။ Tsuang M က, et al ။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအတွက်အသွင်ကူးပြောင်းမှုအပေါ်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လွှမ်းမိုးမှု။ ပြုမူနေ။ မျိုးရိုးဗီဇ။ 1999; 29: 473-479 ။ [PubMed]
193 ။ Kendler KS, Prescott, CA, Neal MC ။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများအတွက်ဘုံစိတ်ရောဂါနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များအတွက်မျိုးရိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အန္တရာယ်အချက်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 60: 929-937 ။ [PubMed]
194 ။ Kreek M က, et al ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့်စွဲဖို့ Impulse, အန္တရာယ်ဆည်းပူးနေ, စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အားနည်းချက်အပေါ်မျိုးရိုးဗီဇလွှမ်းမိုးမှု။ နတ်။ neuroscience ။ 2005; 8: 1450-1457 ။ [PubMed]
195 ။ Nestler EJ ။ စွဲလမ်းတစ်ဘုံမော်လီကျူးလမ်းကြောင်းရှိပါသလား? နတ်။ neuroscience ။ 2005; 8: 1445-1449 ။ [PubMed]
196 ။ Kalivas PW, Volkow ND ။ စွဲလမ်းမှု၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1403-1413 ။ [PubMed]
197 ။ Koob, G, Kreek MJ ။ စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ dysregulation နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့အကူးအပြောင်း။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 164: 1149-1159 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
198 ။ et al နှစ်ရှိမစ္စတာပန်ဒေး SC ။ Neuropeptide Y ကိုနှင့်အရက်: မျိုးရိုးဗီဇမော်လီကျူးများနှင့် pharmacological သက်သေအထောက်အထား။ အရက်: Clin ။ Exp ။ res ။ 2003; 27: 149-154 ။
199 ။ neuropeptide Y. Neuropeptides အပေါ်သုံးသပ်ချက်များကိုပြန်လည် Gehlert ဃနိဒါန်း။ 2004; 38: 135-140 ။ [PubMed]
200 ။ Valdez ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Koob gf ။ Allostasis နှင့် corticotropin-releasing အချက်နှင့် neuropeptide Y ကိုစနစ်များ dysregulation: အရက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 2004; 79: 671-689 ။ [PubMed]
201 ။ Kathuria S က, et al ။ anandamide Hydrolysis ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းမှတဆင့်စိုးရိမ်စိတ်၏ Modulation ။ နတ်။ Med ။ 2003; 9: 76-81 ။ [PubMed]
202 ။ DiMarzo V ကို, အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်စွမ်းအင်ချိန်ခွင် Matias ဗြဲ Endocannabinoid ထိန်းချုပ်မှု။ နတ်။ neuroscience ။ 2005; 8: 585-589 ။ [PubMed]
203 ။ di S က, et al ။ Rapid glucocorticoid-mediated endocannabinoid လွှတ်ပေးရန်နှင့် hypothalamic magnocellular အာရုံခံမှအချိုမှုများနှင့်ဂါဘမြို့သားသွင်းအားစု၏ဆန့်ကျင်စည်းမျဉ်း။ ဟိုမုန်းစနစ်ဘာသာရပ်။ 2005; 145: 4292-4301 ။ [PubMed]
204 ။ Cobb CF, ဗန်သီရဲလ် DH ။ အီသနော-သွေးဆောင် adrenal ဆွ၏ယန္တရား။ အရက်: Clin ။ Exp ။ res ။ 1982; 6: 202-206 ။
205 ။ Cinciripini pm တွင်, et al ။ အဆိုပါခံစားချက်အပေါ်ဆေးလိပ်၏ဆိုးကျိုးများ, non-စိတ်ဖိစီးမှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်မိုးသည်းထန်စွာနဲ့အလင်းဆေးလိပ်သောက်၏နှလုံးသွေးကြောနှင့် adrenergic reactivity ကို။ Biol ။ Psychol ။ 1989; 29: 273-289 ။ [PubMed]
206 ။ et al Wilkins ဖြစ်မှု။ cortisol, ကြီးထွားဟော်မုန်းများနှင့်အထီးနာတာရှည်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် prolactin ၏အဆင့်ဆင့်ပျံ့နှံ့နေတဲ့စီးကရက်ဆေးလိပ်တိုးထံမှနီကိုတင်း။ Psychopharmacology ။ 1982; 78: 305-308 ။ [PubMed]
207 ။ Wand GS, Dobs AS ။ တက်တက်ကြွကြွမသောက်အရက်သမားအတွက် hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးအတွင်း ALTER ။ ဂျေ Clin ။ Endocrinol ။ Metab ။ 1991; 72: 1290-1295 ။ [PubMed]
208 ။ et al Baumann MH ။ လူ့ကင်းချိုးဖောက် plasma cortisol နှင့် prolactin အပေါ်သွေးကြောသွင်းကင်း၏ဆိုးကျိုးများ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1995; 38: 751-755 ။ [PubMed]
209 ။ et al Heesch CM ။ လူသားတွေအတွက် cortisol လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအပေါ်ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှုများ။ နံနက်။ ဂျေ Med ။ သိပ္ပံ။ 1995; 310: 61-64 ။ [PubMed]
210 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive သီအိုရီ။ ဦးနှောက် Res ။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 1993; 18: 247-291 ။ [PubMed]
211. Mello NK, Mendelson JH ။ neuroendocrine စနစ်များအပေါ်ကိုကင်း၏သက်ရောက်မှု: လက်တွေ့နှင့် preclinical လေ့လာမှုများ။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ Behav ။ 1997; 57: 571-599 ။ [PubMed]
212 ။ et al Mendelson JH ။ အမျိုးသားများတွင်စိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်များနှင့် HPA ဝင်ရိုးပေါ်ဆေးလိပ်နည်းပါးခြင်းနှင့်မြင့်မားသောနီကိုတင်းစီးကရက်၏ဆိုးကျိုးများ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 1751-1763 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
213 ။ Sofuoglu M က, et al ။ သွေးကြောသွင်းကင်းသောလူသားမြားအတွက်ပလာစမာ epinephrine နှင့် norepinephrine တိုးပွားစေပါသည်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 2001; 68: 455-459 ။ [PubMed]
214 ။ et al Mendelson JH ။ အမျိုးသားများတွင်မူအကျင့်, နှလုံးသွေးကြောနှင့် neuroendocrine function ကို: ကိုကင်းသည်းခံစိတ်။ Neuropsychopharmacology ။ 1998; 18: 263-271 ။ [PubMed]
215. D'Souza: D ။ ကျန်းမာသူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်သွေးကြောသွင်း delta-9-tetrahydrocannabinol ၏ psychotomimetic သက်ရောက်မှု: စိတ္တများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuropsychopharmacology ။ 2004; 29: 1558-1572 ။ [လက်တွေ့စမ်းသပ်။ ဂျာနယ်ဆောင်းပါး။ ကျပန်းထိန်းချုပ်ထိန်းချုပ်မှု] [PubMed]
216 ။ Kreek MJ, Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးမှီခို: ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့် dysregulation ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1998; 51: 23-47 ။ [PubMed]
217 ။ ချန် H ကို, ဖူ Y ကို, Sharp က BM ။ နာတာရှည်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုပျော့စူးရှသောကဖိစီးမှုမှ hypothalamic-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှုကိုကြီးထွားများပြားစေ။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 721-730 ။ [PubMed]
218 ။ et al ho WKK ။ ဘိန်းဖြူ-စွဲခြင်းနှင့်ပုံမှန်ဘာသာရပ်များအကြားသွေးရည်ကြည်ဟော်မုန်းအဆင့်ဆင့်၏နှိုင်းယှဉ်။ Clinica Chimica Acta ။ 1977; 75: 415-419 ။
219 ။ et al Facchinetti F ကို။ ဘိန်းဖြူစွဲ၏ Hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1985; 15: 361-366 ။ [PubMed]
220 ။ et al Shively, CA ။ မျောက်ဝံများအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအပေါ်နာတာရှည်အလယ်အလတ်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင် (Macaca fascicularis) ၏ဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2007; 192: 183-191 ။ [PubMed]
221 ။ et al ယော JF ။ မိုးသည်းထန်စွာသောက်အတွက် HPA ဝင်ရိုး၏ချို့ယွင်း inhibitory ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အထောက်အထား: ပုံကျန်းမာတဲ့အမျိုးသားများတွင်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်း, ဆီး cortisol နှင့်နှလုံးခုန်နှုန်းပြောင်းလဲနိုင်သည်။ int ။ ဂျေ Psychophysiol ။ 2006; 59: 244-250 ။ [PubMed]
222 ။ KJ bar, et al ။ နှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနှင့်စူးရှသောအရက်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါခံစားနေရပြီးအထီးလူနာအတွက်စာနာအသားအရေတုံ့ပြန်မှု။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2006; 30: 1592-1598 ။ [PubMed]
223 ။ Ignar DM, Kuhn CM ။ ကြွက်များတွင် hypothalamo-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး Secret အပေါ်တိကျတဲ့ mu နှင့် Kappa opiate သည်းခံစိတ်နှင့် abstinence ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 1990; 255: 1287-1295 ။ [PubMed]
224 ။ Borowsky B, Kuhn CM ။ ကိုကင်း-သွေးဆောင် hypothalamo-pituitary-adrenal activation ၏ Monoamine ဖျန်ဖြေခြင်း။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 1991; 256: 204-210 ။ [PubMed]
225 ။ Alcaraz ကို C, Vargas ML, Milan သင်္ဘော MV ။ နာတာရှည် naloxone-သွေးဆောင် supersensitivity hypothalamus-pituitary-adrenocortical ဝင်ရိုးမှာမော်ဖင်းအကိုက်အပေါ်မဟုတ်သလိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုရန်မသည်းခံစိတ်သက်ရောက်သည်။ Neuropeptides ။ 1996; 30: 29-36 ။ [PubMed]
226 ။ Mantsch JR, et al ။ ရှည်လျားသော-access ကိုအခြေအနေများအောက်တွင် Daily သတင်းစာကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပလာစမာ corticosterone အတွက်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း-သွေးဆောင်တိုးကြီးထွားများပြားစေခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင် glucocorticoid အဲဒီ receptor-mediated အနုတ်လက္ခဏာတုံ့ပြန်ချက်ချို့ယွင်း။ ဦးနှောက် Res ။ 2007; 1167: 101-111 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
227 ။ Adinoff B, et al ။ မကြာသေးမီနှင့်ရေရှည်နေကြပြီးအရက်သမားအတွက်ဟော်မုန်းနှင့် corticotropin အဆင့်ဆင့်ဖြန့်ချိ Hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးလည်ပတ်ခြင်းနှင့် cerebrospinal fluid corticotropin ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1990; 47: 325-330 ။ [PubMed]
228 ။ Adinoff B, et al ။ ခြောက်လအမျိုးသားများတွင်ငွေထုတ်စဉ်အတွင်း functioning hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုး၏နှောင့်အယှက်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1991; 148: 1023-1025 ။ [PubMed]
229 ။ Ehrenreich H ကို, et al ။ endocrine နှင့်အစောပိုင်းနှင့်အလတ်စားသက်တမ်း abstinence စဉ်အတွင်းအရက်သမားအတွက်စနစ်တကျ CRF နှိုင်းယှဉ်စိတ်ဖိစီးမှု hemodynamic ဆိုးကျိုးများ။ အရက်: Clin ။ Exp ။ res ။ 1997; 21: 1285-1293 ။
230 ။ et al Vescovi PP ။ ပလာစမာ ACTH, cortisol နှင့်ကိုကင်းစွဲအတွက် beta ကို-နဲ့အတူ Endorphins အဆင့်ဆင့်အတွက် Diurnal များပါတယ်။ ဟော်မုန်း Res ။ 1992; 37: 221-224 ။ [PubMed]
231 ။ Tsuda တစ်ဦးက, et al ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်နှင့် psychophysiological စိတ်ဖိစီးမှုတုန့်ပြန်: မကြာသေးမီဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ယာယီ abstinence သက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology ။ 1996; 126: 226-233 ။ [PubMed]
232 ။ Kreek MJ ။ Opiate နှင့်ကိုကင်းစှဲ: pharmacotherapies ဘို့စိန်ခေါ်။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 1997; 57: 551-569 ။ [PubMed]
233 ။ et al Schluger JH ။ methadone အတွက်စမ်းသပ် metyrapone မှပြောင်းလဲ HPA ဝင်ရိုး Response ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောကင်းစွဲနှင့်အတူဟောင်းတဦးဘိန်းဖြူစွဲထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2001; 24: 568-575 ။ [PubMed]
234 ။ Ingjaldsson JT, Laberg JC, ယော JF ။ နာတာရှည်အရက်အလွဲသုံးစားမှုများတွင်လျှော့ချနှလုံးခုန်နှုန်းအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲ: အနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်, နာတာရှည်အတွေးဖိနှိပ်မှုများနှင့် compulsive သောက်သုံးရေနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမျိုး။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 54: 1427-1436 ။ [PubMed]
235 ။ Contoreggi ကို C, et al ။ ပြင်းထန် comorbid စိတ်ရောဂါရောဂါမရှိဘဲဥစ္စာချိုးဖောက် corticotropin-releasing ဟော်မုန်းမှစိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းတုံ့ပြန်မှု။ Soc ။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 54: 873-878 ။
236 ။ Adinoff B, et al ။ အဆိုပါ HPA ဝင်ရိုးစိတ်ဖိစီးမှု-တုံ့ပြန်မှုနှိမ်နင်းရေး: relapse များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2005; 29: 1351-1355 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
237 ။ Rasmussen DD, Wilkinson CW, Raskind MA ။ နာတာရှည်နေ့စဉ်အီသနောနှင့်ဆုတ်ခွာ:6။ "abstinence ။ " အရက်ကာလအတွင်းကြွက် sympathoadrenal လှုပ်ရှားမှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ 2006; 38: 173-177 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
238 ။ et al Rechlin T က။ အရက်-မှီခိုလူနာအတွက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှလုံးမူမမှန်တစ်စိတ်ရောဂါဌာနမှဝန်ခံခဲ့သည်။ Clin ။ Auton ။ res ။ 1996; 6: 119-122 ။ [PubMed]
239 ။ Sinha R ကို, et al ။ အနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အရက်တဏှာ Enhanced နှင့်အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် cue ထိတွေ့အောက်ပါဇီဝကမ္မတုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ Neuropsychophamacol ။ 2008 [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ် 18 ဇွန်လ: Doi: 10.1038 / npp.2008.78]
240 ။ et al McDougle CJ ။ စွဲထဲမှာကိုကင်းသုံးစွဲမှုပြတ်တောက်စဉ်အတွင်း Noradrenergic dysregulation ။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 51: 713-719 ။ [PubMed]
241 ။ et al di Chiara, G, ။ Dopamine နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲ: အနျူကလိယ shell ကိုကွန်နက်ရှင် accumbens ။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 227-241 ။ [PubMed]
242 ။ Rossetti ZL, Hmaidan Y ကို, Gessa GL ။ mesolimbic dopamine လွှတ်ရာသိသိသာသာတားစီး: ကြွက်များတွင်အီသနော, မော်ဖင်းအကိုက်, ကင်းများနှင့်စိတ်ကြွဆေး abstinence တစ်ဘုံအင်္ဂါရပ်။ အီးယူအာရ်။ ဂျေ Pharmacol ။ 1992; 221: 227-234 ။ [PubMed]
243 ။ Parsons LH, Smith ကအေဒီ, တရားမျှတမှု JB ။ , ဂျူနီယာ Basal extracellular dopamine နာတာရှည်ကင်းထံမှ abstinence စဉ်အတွင်းကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်လျော့နည်းသွားသည်။ synapses ။ 1991; 9: 60-65 ။ [PubMed]
244 ။ ဒိုင်ယာနာ M က, et al ။ ကြွက်များတွင်အီသနောဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါစဉ်အတွင်း mesolombic dopaminergic အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု၏လေးနက်လျှော့: Electophysiological နှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးသက်သေအထောက်အထား။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 1993; 90: 7966-7969 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
245 ။ ဒိုင်ယာနာ M က, et al ။ cannabinoid ဆုတ်ခွာပြီးနောက် Mesolimbic dopaminergic ကျဆင်း။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 1998; 95: 10269-10273 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
246 ။ et al Weiss က F ။ အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှီခိုကြွက်များတွင် accumbal dopamine နဲ့ 5-hydroxytryptamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ဆုတ်ခွာ-ဆက်စပ်ချို့တဲ့ restores ။ ဂျေ neuroscience ။ 1996; 16: 3474-3485 ။ [PubMed]
247 ။ et al Moore က RJ ။ မျောက်တွေကိုအတွက် striatal dopamine D1 receptors အပေါ်ကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေး effect ။ synapses ။ 1998; 28: 1-9 ။ [PubMed]
248 ။ et al Zhang က Y ကို။ Basal အဆင့်ဆင့်နှင့် C57BL / 6J နှင့် 129 / J ကိုကြွက်များ၏ caudate putamen နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine ၏ကင်း-သွေးဆောင်တိုးအပေါ်နာတာရှည် "မူးရူးကိုကင်း" ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ synapses ။ 2003; 50: 191-199 ။ [PubMed]
249 ။ et al Nader, MA ။ မျောက်များအတွက်နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း dopamine D2 receptors ၏ပေပုံရိပ်။ နတ်။ neuroscience ။ 2006; 9: 1050-1056 ။ [PubMed]
250 ။ et al Koob gf ။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကနေအကူးအပြောင်းအတွက် Neurobiological ယန္တရားများ။ neuroscience ။ Biobehav ။ ဗျာ 2004; 27: 739-749 ။ [PubMed]
251 ။ Mateo Y ကို, et al ။ ကိုကင်းမူးရူး Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆင်းရဲချို့တဲ့အောက်ပါကင်းဖို့ dopamine terminal ကို function ကိုနှင့်အာရုံမခံစားနိုင်သောလျှော့ချ။ Neuropsychopharmacology ။ 2005; 30: 1455-1463 ။ [PubMed]
252 ။ et al Beveridge T က။ အဆိုပါ nonhuman မျောက်ဦးနှောက်ထဲမှာ norepinephrine ပို့ဆောင်ရေးအပေါ်နာတာရှည်ကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးဆိုးကျိုးများ။ Psychopharmacology ။ 2005; 180: 781-788 ။ [PubMed]
253 ။ et al Porrino LJ ။ ကိုကင်းများ၏သက်ရောက်မှု: စွဲ၏သင်တန်းကျော်တစ်ဦးပြောင်းလဲပစ်မှတ်။ prog ။ Neuro-Psychopharmacol ။ Biol ။ Psychiat ။ 2007; 31: 1593-1600 ။
254 ။ et al Volkow ND ။ dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လျှော့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သည်လျော့သွားသည်။ synapses ။ 1993; 14: 169-177 ။ [PubMed]
255 ။ et al Volkow ND ။ အရက်သမားအတွက် dopamine receptors အတွက်မဟုတ် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လျော့နည်းစေပါသည်။ အရက်: Clin ။ Exp ။ res ။ 1996; 20: 1594-1598 ။
256 ။ et al Volkow ND ။ detoxified ကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် striatal dopaminergic တုန့်ပြန်လျော့သွားသည်။ သဘာဝ။ 1997; 386: 830-833 ။ [PubMed]
257 ။ Martinez: D, et al ။ ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်: သိသိသာသာကင်းမှီခိုနှင့် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကင်းဖို့ရှေးခယျြမှု၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များတွင်ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 164: 622-629 ။ [PubMed]
258 ။ Gambarana ကို C, et al ။ တစ်ဦး microdialysis လေ့လာမှု: ကြွက်များတွင် reactivity ကိုချို့ယွင်းနေသောတစ်ဦးကနာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်းနျူကလိယ accumbens အတွက် dopaminergic ဂီယာလျော့နည်းစေပါသည်။ ဂျေ Neurochem ။ 1999; 72: 2039-2046 ။ [PubMed]
259 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်းမှု၏စိတ်ပညာနှင့် neurobiology: တစ်ခုမက်လုံးပေး-sensitive အမြင်။ စွဲလမ်း။ 2000; 95 (ပျော့ပျောင်း 2): S91-S117 ။ [PubMed]
260 ။ Nestler အီး, မျှော်လင့်ခြင်း, B, Widnell K. မူးယစ်ဆေးစွဲ: အာရုံကြော plasticity ၏မော်လီကျူးအခြေခံများအတွက်မော်ဒယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1993; 11: 995-1006 ။ [PubMed]
261 ။ အဖြူရောင်က F, Hu XT, ဟင်နရီ DJ သမား, Zhang က XF ။ ထပ်ခါတလဲလဲကင်းအုပ်ချုပ်မှုကာလအတွင်း mesocorticolimbic dopamine စနစ် Neurophysiological ပွောငျးလဲ။ ခုနှစ်တွင်: Hammer R ကို, အယ်ဒီတာ။ ကိုကင်းများ၏ Neurobiology: ဆယ်လူလာနှင့်မော်လီကျူးယန္တရားများ။ စီအာစီစာနယ်ဇင်း; Boca Raton, FL: 1995 ။ စစ။ 95-115 ။
262 ။ ပီယပ် RC, Kalivas PW ။ စိတ်ကြွဆေးကဲ့သို့သောစိတ်ကြွဆေးမှအမူအကျင့်အကဲဆတ်ခြင်းဟူသောအသုံးအနှုနျးမြား၏တစ်ဦးက circuitry မော်ဒယ်။ ဦးနှောက် Res ။ ဗျာ 1997; 25: 192-216 ။ [PubMed]
263 ။ Grimm JW, Shaham Y ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT ။ ကိုကင်းနှင့်အမျိုးသုဉ်းအပြုအမူအပေါ် sucrose ဆုတ်ခွာကာလ, cue-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်ကြွက်များတွင် limbic နှင့် cortical ဒေသများအတွက် dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် tyrosine hydroxylase ၏ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြုမူနေ။ Pharmacol ။ 2002; 13: 379-388 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
264 ။ et al lu L ကို။ ဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား: preclinical အချက်အလက်များ၏သုံးသပ်ချက်။ Neuropharmacology ။ 2004; 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 214-226 ။ [PubMed]
265 ။ Hyman SE, Malenka RC, Nestler EJ ။ စွဲလမ်း၏အာရုံကြောယန္တရားများ: ဆုလာဘ်-related သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Annu ။ ဗျာ neuroscience ။ 2006; 29: 565-598 ။ [PubMed]
266 ။ Hughes JR ။ Self-quitters အတွက်ဆေးရွက်ကြီးဆုတ်ခွာ။ ဂျေနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ Clin ။ Psychol ။ 1992; 60: 689-697 ။ [PubMed]
267 ။ Kouri EM, ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး HG, Jr. လောနိတျမွို့ SE ။ ရေရှည်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်းကနေဆုတ်ခွာစဉ်ကရန်လိုသည့်အပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများ။ Psychopharmacology ။ 1999; 143: 302-308 ။ [PubMed]
268 ။ et al Mulvaney FD ။ ကိုကင်း abstinence symptomatology နှင့်ကုသမှု attrition ။ ဂျေ Subst ။ အလွဲသုံးမှု။ ဆက်ဆံပါ။ 1999; 16: 129-135 ။ [PubMed]
269 ။ Budney AJ, Hughes JR ။ အဆိုပါဆေးခြောက်ဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ။ Curr ။ Opin ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 19: 233-238 ။ [PubMed]
270 ။ Volkow N ကို, မုဆိုး JS ။ စွဲလမ်း, မလှူခြင်းနှင့် drive ကိုတစ်ဦးရောဂါ: အ orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Cereb ။ cortex ။ 2000; 10: 318-325 ။ [PubMed]
271 ။ စီးကရက်ဆေးလိပ်အပေါ် Baker တီဘီ, Brandon TH, Chassin အယ်လ်လှုံ့ဆော်လွှမ်းမိုးမှု။ Annu ။ ဗျာ Psychol ။ 2004; 55: 463-491 ။ [PubMed]
272 ။ Dodge R ကို, Sindelar J ကို, Sinha R. ပြင်ပလူနာပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုကုသမှုမူးယစ်ဆေး abstinence ခန့်မှန်းအတွက်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဂျေ Subst ။ အလွဲသုံးစားမှုဆက်ဆံပါ။ 2005; 28: 189-196 ။ [PubMed]
273 ။ Paliwal P ကို, Hyman သည် SM, Sinha R. တဏှာကင်း relapse ဖို့အချိန်ခန့်မှန်းထားသည်: အကိုကင်းတဏှာမေးခွန်းလွှာများ Now နှင့်အကျဉ်းဗားရှင်း၏နောက်ထပ်အတည်ပြု။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2008; 93: 252-259 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
274 ။ Sinha R. စွဲ relapse အတွက်စိတ်ဖိစီးမှု၏အခန်းကဏ္ဍ။ Curr ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုကိုယ်စားလှယ် 2007;9။ 388-395 ။ [PubMed]
275 ။ အဆိုပါ neurophysiological အခြေခံမော်ဖင်းအကိုက်စွဲအပေါ်သုတေသနအတွက် Wikler အေလတ်တလောတိုးတက်မှု။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1948; 105: 328-338 ။
et al 276. O'Brien က CP ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု၏အခြေအနေများ - သူတို့ရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှင်းပြနိုင်ပါသလား။ ဂျေ Psychopharmacol ။ 1998; 12: 15-22 ။ [PubMed]
277 ။ et al Sayette MA ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏တိုင်းတာခြင်း။ စွဲလမ်း။ 2000; 95 (ပျော့ပျောင်း 2): S189-210 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
278 ။ Childress တစ်ဦးက, et al ။ မူးယစ်ဆေးမှီခိုအတွက် Cue reactivity ကိုနှင့် cue reactivity ကိုကြားဝင်။ NIDA Res ။ Monogr ။ 1993; 137: 73-95 ။ [PubMed]
279 ။ et al Rohsenow DJ သမား။ သီအိုရီနှင့်ကုသမှုဂယက်: စွဲလမ်းအပြုအမူတွေအတွက် Cue reactivity ကို။ int ။ ဂျေစွဲ။ 1991; 25: 957-993 ။ [PubMed]
280 ။ Foltin RW, Haney အမ်လူသားတွေအတွက်သောက်သည်ကိုကင်းနှင့်အတူတွဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုများ၏သက်ရောက်မှုများအေးစက်။ Psychopharmacology ။ 2000; 149: 24-33 ။ [PubMed]
281 ။ Stewart ကဂျေအေ။ ပြန်သွားကြသည်ဖို့လမ်းကြောင်း: အချက်များနေကြပြီးရှာမူးယစ်ဆေး၏ Reinitiation ထိန်းချုပ်ခြင်း။ Nebraska စာနယ်ဇင်းတက္ကသိုလ်; လင်ကွန်း: 2003 ။
282 ။ Sinha R ကို, et al ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာပြည်နယ်များစဉ်အတွင်း Hypothalamic-pituitary-adrenal ဝင်ရိုးနှင့် sympatho-Adreno-medullary တုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2003; 170: 62-72 ။ [PubMed]
283. Sinha R ကို, O'Malley အက်စ်အက်စ်။ အရက်နှင့်တပ်မက်ခြင်း: ဆေးခန်းနှင့်ဓာတ်ခွဲခန်းမှတွေ့ရှိချက်များ။ အရက်။ 1999; 34: 223-230 ။ [PubMed]
284. Sinha R ကို, Catapano: D, O'Malley S. စိတ်ဖိစီးမှု - သွေးဆောင်စွဲနှင့်ကိုကိုးမှီခိုတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 1999; 142: 343-351 ။ [PubMed]
285 ။ Sinha R ကို, et al ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုနှင့်ကင်းတပ်မက်။ Psychopharmacology (Berl) ။ 2000; 152: 140-148 ။ [PubMed]
286 ။ et al Fox က HC ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်မကြာသေးမီက abstinent အရက်မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အရက် cue-သွေးဆောင်တဏှာ။ အရက်: Clin ။ Exp ။ res ။ 2007; 31: 395-403 ။
287 ။ et al Hyman သည် SM ။ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် naltrexone ကုသမှု opioid-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မူးယစ်ဆေး-cue-သွေးဆောင်တဏှာ။ Exp ။ Clin ။ Psychopharmacol ။ 2007; 15: 134-143 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
288 ။ et al Lovallo WR ။ abstinent အရက်နှင့် polysubstanceabusing လူတုံးစိတ်ဖိစီးမှု cortisol တုံ့ပြန်မှု။ အရက်: Clin ။ Exp ။ res ။ 2000; 24: 651-658 ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုအပေါ် adrenocorticotropic တုန့်ပြန်မှု ၂၈၉။ Al'absi M၊ Hatsukami DK၊ Psychopharmacology (Berl ။ ) 289; 2005: 181-107 ။ [PubMed]
290 ။ Badrick အီး, Kirschbaum ကို C, Kumari အမ်ဆေးလိပ်သောက် status ကိုနဲ့ Cortisol Secret အကြားဆက်ဆံရေးဟာ။ ဂျေ Clin ။ Endocrinol ။ Metab ။ 2007; 92: 819-824 ။ [PubMed]
291 ။ et al Fox က HC ။ လူမှုရေးသောက်နှိုင်းယှဉ် abstinent ကင်း-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး / အရက်သေစာတဏှာမှ Enhanced sensitivity ကို။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 796-805 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
292 ။ S ကပေးသနား, et al ။ cue-ရူးနှမ်းကိုကင်းတဏှာစဉ်အတွင်းမှတ်ဉာဏ်ဆားကစ်၏ activation ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 1996; 93: 12040-12045 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
293 ။ et al Childress AR ။ cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာစဉ်အတွင်း Limbic activation ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 156: 11-18 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
294 ။ Kilts ကို C, Schweitzer JB, Quinn CK, et al ။ ကိုကင်းစွဲထဲမှာမူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်ပတ်သက်သောအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 58: 334-341 ။ [PubMed]
295 ။ et al Kilts CD ကို။ ကိုကင်း-မှီခိုအမျိုးသမီး cue-သွေးဆောင်တဏှာ၏အာရုံကြောဆက်စပ်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 161: 233-241 ။ [PubMed]
296 ။ Li က CS, Kosten TR, abstinent ကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက်စိတ်ဖိစီးမှုပုံရိပ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ကို Activation အတွက် Sinha R. လိင်ကွဲပြားမှု: တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 57: 487-494 ။ [PubMed]
297 ။ Sinha R ကိုလီ CS ။ imaging stress- နှင့် cue-သွေးဆောင်မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်တဏှာ: relapse နှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့။ မူးယစ်ဆေးအရက်ဗျာ 2007; 26: 25-31 ။ [PubMed]
298 ။ Sinha R ကို, et al ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာနဲ့ဆက်စပ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု: တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပုံရိပ်လေ့လာမှု။ Psychopharmacol ။ 2005; 183: 171-180 ။
299 ။ et al Wong က DF ။ cue-ရူးနှမ်းကိုကင်းတဏှာစဉ်အတွင်းလူ့ striatum အတွက် dopamine receptors ၏ထေိုတိုးတက်လာခဲ့သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 2716-2727 ။ [PubMed]
300 ။ et al Volkow ND ။ dorsal striatum အတွက်ကိုကင်းတွေကိုနှင့် dopamine: ကိုကင်းစွဲထဲမှာတဏှာ၏ယန္တရား။ ဂျေ neuroscience ။ 2006; 26: 6583-6588 ။ [PubMed]
301 ။ Grusser S က, et al ။ Cue-သွေးဆောင်အဆိုပါ striatum ၏ activation နှင့် prefrontal cortex medial abstinent အရက်သမားအတွက်နောက်ဆက်တွဲ relapse နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2004; 175: 296-302 ။ [PubMed]
302 ။ et al Wrase J ကို။ အရက်သမားအရက်-ဆက်စပ်တွေကိုနှင့် cue-သွေးဆောင်ဦးနှောက်ကို Activation ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ ဂျေ Assoc ။ အီးယူအာရ်။ စိတ်ရောဂါ။ 2002; 17: 287-291 ။
303 ။ Heinz တစ်ဦးက, et al ။ dopamine: D (2) အကြားဆက်စပ်မှုဟာ ventral striatum နှင့်အရက်တွေကိုနှင့်တဏှာ၏ဗဟိုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် receptors ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2004; 161: 1783-1789 ။ [PubMed]
304 ။ Martinez: D, et al ။ အရက်မှီခိုအဆိုပါ ventral striatum အတွက်တုံး dopamine ဂီယာနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Biol ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 58: 779-786 ။ [PubMed]
305 ။ Hester R ကို, ကိုကင်းစွဲအတွက် Garavan အိပ်ချ်အလုပ်အမှုဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှု: စိတ်တိုးပွားတိုကျရိုကျအဘို့သက်သေသာဓက, cingulate နှင့် cerebellar လှုပ်ရှားမှု။ ဂျေ neuroscience ။ 2004; 24: 11017-11022 ။ [PubMed]
306 ။ အဖြစ်အပျက်-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်အားဖြင့် Kaufman J ကို, ရော့စ်တီဂျေ, Stein EA ၏တစ်ဦး GO-NOGO တာဝန်စဉ်အတွင်းကင်းသည်အသုံးပြုသူများအတွက် Garavan အိပ်ချ် Cingulate hypoactivity ထင်ရှားအဖြစ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2003; 23: 7839-7843 ။ [PubMed]
307 ။ နို X ကို, et al ။ တုန့်ပြန်တားစီးလိုငွေပြမှုရက်အတူ Non-amnesic တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အန္တရာယ်အောက်တွင်အောင်ဆင်းရဲသောသူသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်သည်။ Neuropsychology ။ 2007; 21: 778-786 ။ [PubMed]
308 ။ et al Ersche KD ။ လက်ရှိနှင့်ယခင်စိတ်ကြွဆေးနှင့် opiate မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပုံမှန်မဟုတ်သောတိုကျရိုကျ Active ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2005; 180: 612-623 ။ [PubMed]
309 ။ et al Ersche KD ။ စိတ်ကြွဆေးနှင့် opiate မှီခိုနှင့်ဆက်စပ်အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့်မှတ်ဉာဏ် function ကို၏ပရိုဖိုင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2006; 31: 1036-1047 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
310 ။ Ersche KD, Roiser JP, Robbins TW, Sahakian BJ ။ နာတာရှည်ကင်းပေမယ့်နာတာရှည်မဟုတ်စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲခြင်းလူသားများတွင်တုံ့ပြန် perseverative နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ (။ Berl) Psychopharmacology 2008; 197 (3): 421-431 ။ [PubMed]
311 ။ Paulus အမတ်, Tapert SF, Schuckit MA ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်းစိတ်ကြွဆေး-မှီခိုဘာသာရပ်များ၏အာရုံကြော activation ပုံစံများ relapse ကြိုတင်ခန့်မှန်း။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 62: 761-768 ။ [PubMed]
312 ။ et al li C. -SR ။ အာရုံကြောကိုကင်း-မှီခိုအမျိုးသားများတွင်ရပ်တန့် signal ကိုတားစီးနေစဉ်အတွင်းချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2008; 33: 1798-1806 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
313. O'Brien က CP ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက်ဆေးတိုက်ကျွေးသောဆေးများ - ဖြစ်နိုင်သောစိတ်အသစ်သောအတန်းအစားအသစ်များ။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1423-1431 ။ [PubMed]
314 ။ Vocci က F, Acri J ကို, စွဲလမ်းမမှန်များအတွက် Elkashef အေဆေးဝါးဖှံ့ဖွိုးတိုး: အသိပ္ပံပညာ၏ပြည်နယ်။ နံနက်။ ဂျေစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 162: 1432-1440 ။ [PubMed]
315 ။ et al Shaham Y ကို။ သမိုင်း, နည်းစနစ်နှင့်အဓိကတွေ့ရှိချက်: မူးယစ်ဆေး relapse ၏ reinstatement မော်ဒယ်။ Psychopharmacology ။ 2003; 168: 3-20 ။ [PubMed]
316 ။ Shaham Y ကို, မျှော်လင့်ခြင်း BT ။ မူးယစ်ဆေးရှာဖို့ relapse အတွက် neuroadaptations ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ နတ်။ neuroscience ။ 2005; 8: 1437-1439 ။ [PubMed]
317 ။ တဏှာ၏ Weiss အက်ဖ် Neurobiology, အေးစက်ဆုလာဘ်များနှင့် relapse ။ Curr ။ Opin ။ Pharmacol ။ 2005; 5: 9-19 ။ [PubMed]
318 ။ et al Marinelli PW ။ အဆိုပါ CRF1 အဲဒီ receptor ရန် antalarmin အော်ပရေတာအရက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကြွက်များအတွက်ရှာကြံအရက်၏ reinstatement အတွက် yohimbine-သွေးဆောင်တိုး attenuates ။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2007; 195: 345-355 ။ [PubMed]
319 ။ ဂျော့ခ်ျအို et al ။ CRF-CRF1 system ကို activation နီကိုတင်း-မှီခိုကြွက်များတွင်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ဆုတ်ခွာ-သွေးဆောင်တိုး mediates ။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ။ 2007; 104: 17901-17902 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
320 ။ Mantsch JR, et al ။ Stressor- နှင့် corticotropin အချက်-သွေးဆောင် reinstatement နှင့်တက်ကြွသောစိတ်ဖိစီးမှု-related အပြုအမူတုံ့ပြန်မှုလွှတ်ကြွက်များအားဖြင့်ရှည်လျား-access ကိုကိုကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါလုပ်ခဲ့ပြီးနေကြသည်။ Psychopharmacology (Berl ။ ) 2008; 195: 591-603 ။ [PubMed]
321 ။ Koob gf, ဆုလာဘ် neurocircuitry နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ 'မှောင်မိုက်ဘက်' '၏သည် Le Moal အမ်ပလပ်စတစ်။ နတ်။ neuroscience ။ 2005; 8: 1442-1444 ။ [PubMed]
322 ။ et al lu L ကို။ အဆိုပါ mGluR (2 / 3) agonist LY379268 ၏စနစ်နှင့်ဗဟို amygdala ထိုးကင်းတဏှာ၏ပေါက်ဖွား၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး attenuate ။ Biol ။ psyche ။ 2007; 61: 591-598 ။
323 ။ Zhao နှင့် Y ကို, et al ။ အုပ်စုတစ်စု II ကို metabotropic အချိုမှု receptors ၏ activation စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် cue-သွေးဆောင်အီသနော-ရှာနှစ်ဦးစလုံး attenuates နှင့် hippocampus နှင့် amygdala အတွက်က c-fos စကားရပ် modulates ။ ဂျေ neuroscience ။ 2006; 26: 9967-9974 ။ [PubMed]
324 ။ Aujla H ကိုမာတင်-Fardon R ကို, ကိုကင်းပြပွဲမှတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူ Weiss အက်ဖ်သည်အထိ abstinence စဉ်အတွင်း mGluR2/3agonist LY379268 ၏ anxiolytic ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများမှစိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကိုနှင့် sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007; 33: 1818-1826 ။ [PubMed]
325 ။ Sinha R ကို, et al ။ စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာနှင့် hypothalamic-pituitary-adrenal တုံ့ပြန်မှုကင်း relapse ရလဒ်များ၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2006; 63: 324-331 ။ [PubMed]
326 ။ et al Cooney NL ။ အရက် cue reactivity ကိုအနုတ်-စိတ်ဓါတ်များ reactivity ကိုများနှင့်ကုသအရက်သမားယောက်ျားအတွက် relapse ။ ဂျေပုံမှန်မဟုတ်သော။ Psychol ။ 1997; 106: 243-250 ။ [PubMed]
327 ။ Junghanns K ကို Backhaus J ကို, Tietz U. ချို့တဲ့ခြင်းသွေးရည်ကြည် cortisol စိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအစောပိုင်း relapse တစ်ဦးခန့်မှန်းသည်။ အရက်အရက်။ 2003; 38: 189-193 ။ [PubMed]
328 ။ et al Brady KT ။ အေး pressor တာဝန် reactivity ကို: နှင့် comorbid posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါမရှိဘဲအရက်-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအကြားအရက်သေစာအသုံးပြုမှုခန့်မှန်း။ အရက် Clin ။ Exp ။ res ။ 2006; 30: 938-946 ။ [PubMed]
329 ။ et al Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ ဣန္ဒြေစောင့်ခြင်းနှင့်အ relapse များ၏အန္တရာယ်စဉ်အတွင်းတဏှာ၏စိတ်ဖိစီးမှုတိုးမြှင့်။ အရက်: Clin ။ Exp ။ res ။ 2005; 29: 185-195 ။
330 ။ Sinha R ကို, Kimmerling တစ်ဦးက, စိတ်ဖိစီးမှု-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် cue-သွေးဆောင် opioid တဏှာအပေါ် lofexidine ၏ Doebrick C. အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် opioid abstinence နှုန်းထားများ: ပဏာမတွေ့ရှိချက်။ Psychopharmacology ။ 2007; 190: 569-574 ။ [PubMed]